Author Topic: နှစ်သက်မိသော သရော်စာများ (Read 39288 times)
« Reply #40 on: November 12, 2011, 04:23:22 AM »
နာရီကြည့်စရာမလိုပဲ ကြက်ကလေး ငှက်ကလေးများတောင် သူ့အချိန်သူသိပြီး ပြုနေကျအမှုတို့ကို သူ့ဘာသာမှန်မှန်လုပ်နေကြသော အရပ်မို့ ကိုယ်လည်း ရောက်နေကျအချိန် ဆေးရုံပေါ်ရောက်ရစမြဲ ဖြစ်သည်။ စမ္ပာနဂိုရ်ဆေးရုံ ပြည်သူ့ဆေးရုံရှေ့တွင်လည်း လူနာများတဖွဲဖွဲ ရောက်နှင့်ပြီလေ။ တာဝန်ကျဆရာမများကလည်း မီးခိုးတလူလူနှင့်ဆိုင်ကယ်သံ ဖွတ်ချက်ဖွတ်ချက် ကြားသည်နှင့် ခေါင်းပေါ်အဖြူဆောင်းကလေးတင်သူတင်၊ ပေတံဘောပင် ပြင်သူပြင်၊ တနေကုန် အော်နိုင်ဟစ်နိုင်ရန် လည်ချောင်းရှင်းသူရှင်းဖြင့် ဆရာဝန်ရောက်ကြောင်း လူနာများကို သိသာစေသည်။ လူနာများကလည်း လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာပြီး စာအုပ်ထပ်ထားသောနေရာတွင် ရွစိရွစိ တန်းစီကြပြန်သည်။ နံမည်ခေါ်တုန်း မကြားမိရင် နောက်ဆုံးရောက်သွားမှာ ကြောက်ရသည်ကော။
`ဆေးရုံတက်မယ့်လူနာတွေနဲ့ အရေးကြီး အသည်းအသန်လူနာတွေပဲ အရင် ကြည့်သွားမယ်။ ကျန်တာ ပြန်လာမှ ဆက်ကြည့်မယ်။ ဒီနေ့ အစည်းအဝေးသွားရမှာ။´
မထူးဆန်းသော ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်မို့ သူနာပြုဆရာမကြီးက အဆင်ပြေအောင် စီမံခန့်ခွဲရင်း..
`ညက မွေးလူနာတစ်ယောက် တင်ထားတယ်ဆရာရေ။ လက်နှစ်လုံးလောက် လိုသေးတယ်။ FHS (ကလေးနှလုံးခုန်နှုန်း) လည်း ကောင်းပါတယ်။ သားဦးကိုယ်ဝန်၊ နေ့စေ့လစေ့ပါ။ Synto (သားအိမ်ညှစ်ဆေး) တင်ထားပေးရမလား။ ဆရာပြန်လာရင် အတော်လောက်နေမှာပါ။´
´ခေါင်းထွက်ခါနီးရင် ကျွန်တော့်ဆီဖုန်းဆက်လိုက်။ ခင်ဗျားမဆက်နဲ့။ စစ္စတာအော်ပီကျယ်ကို ဆက်ခိုင်း။ အကျယ်ကြီးအော်ပြောခိုင်း။ ကျွန်တော် စပီကာဖွင့်ထားမယ်။ ကလေးထွက်ထွက် မထွက်ထွက်၊ နောက်တစ်နာရီလောက်ဆိုဆက်လိုက်။ ဆရာရေ ကလေးထွက်နေပြီ။ အခုချက်ခြင်းပြန်လာပါလို့ နှစ်ခါ သုံးခါအော်လိုက်။´
`ပေါက်ပြီဆရာ။ ပေါက်ပြီ။ ခါတိုင်းလည်း ဒိလိုပဲ လုပ်နေကျ။ ဒီတစ်ခါ ဘာအစည်းအဝေးတုန်း။´
`ဟ .. ထုံးစံအတိုင်း မအေးဖွံ့ မြင့်မြင့်စန်း လမ်း၃၀ လေ။ မအေးဖွံ့ရုံးက အစည်းအဝေး။´
`ဘယ်သူတုန်းဆရာရဲ့ မအေးဖွံ့။ ကျွန်မလည်း မကြားဖူးပါဘူး။´
`သိပြီ။ သိပြီ။ အောင်မယ် .. အဲဒါ ကျွန်မက ထူတာမဟုတ်ဘူးဆရာရဲ့။ ဆရာကသာ ထူတာ။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးက ရှိမှ မရှိတော့တာပဲ။ ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီကော။ ဆရာ အများကြီး ခေတ်နောက်ကျနေပြီ။´
`ရော်.. နံမယ်နဲ့ လေသံတွေသာ ပြောင်းသွားတာပါဗျာ။ အကုန်လုံး အရင်လူတွေချည့်ပဲ။ ဘာထူးလို့လဲ။ အရာကြီး နဲ့ ကုလားကြီး။´
`ခေတ်မီချင်လို့ ဒေစီစံတုတ်၊ မာဂရက်ဂွက်ထော် မှည့်ထားတာ။ ချက်စူတို့ ဗိုက်ပူတို့ ငယ်နံမယ်တွေ သွားခေါ်ရင် စိတ်ဆိုးမှာပေါ့ ဆရာရဲ့။ တို့ဆရာတော့ တောစော်နံနေပြီ။´
`တော်ပြီဗျာ။ ခင်ဗျားနဲ့ ငြင်းနေရင် ဒီနေ့ ၀ဒ်ထဲ ရောင်းရမှာမဟုတ်ဘူး။ နောက်တစ်နာရီကြာရင်သာ ဖုန်းဆက်ဖို့ မမေ့နဲ့။ ဒါပဲ ဒါပဲ။´
`ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလား။ ဖုန်းဆက်လိုက်ရမလား´ ဟူသော ဆရာမကြီး အသံကို မသိချင်ယောင်ဆောင်လျက် သုတ်သုတ်သုတ်သုတ်နှင့် လုပ်စရာရှိသမျှတို့ကို ကုပ်ကုပ်ကုပ်ကုပ် လုပ်ပြီးသကာလ ဆိုင်ကယ်အစုတ်ကလေး ဘုတ်ဘုတ်ဘုတ်ဘုတ်နှင့် ထွက်လာသောအခါ ဆေးရုံကြီးမှာလည်း အရင်အတိုင်း လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်ကျန်ခဲ့မည်ကို လှည့်မကြည့်ပဲ သိနေလေသည်။
လူစုံနှင့်သော အစည်းအဝေးခန်းထဲသို့ အတန်းနောက်ကျသော ကျောင်းသားလေးပမာ နောက်နားက၀င်ထိုင်လိုက်သောအခါ မြင်ဖြစ်အောင်မြင်တတ်သော ဆရာများအတိုင်း..
`ဆရာဝန်ကြီး ရောက်ပြီ။ ဒီနေ့ အစည်းအဝေးက ခင်ဗျားနဲ့ အဓိကဆွေးနွေးရမှာ။ ဆေးရုံကိစ္စတွေ ပြောစရာရှိတယ်။´
(ဘယ်နေ့က အစည်းအဝေးတုန်းကရော ကိုယ်မပါပဲ နေခဲ့ပါလိမ့် ) ဟု တွေးရင်း..
(ဘာပြောပြော အဲဒါနဲ့စရတယ်။ မှတ်ထား)
´အရင်တစ်ပါတ်တုန်းက တောင်းထားတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ အကုန်ပို့လိုက်ပြီးပါပြီ။´
`ဟုတ်တယ်။ အဲဒါတွေပဲ ပြောမလို့။ ကျွန်တော်တို့ စမ္ပာနဂိုရ်မြို့ကလေးကနေ ဂန္ဓာလရာဇ်တိုင်းအထိရောက်အောင် ပိုက်လိုင်းကြီးသွယ်ဖို့၊ ရထားလမ်းကြိးဖောက်ဖို့ ဗာရာဏသီပြည်က ကျွမ်းကျင်သူတွေနဲ့ စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါ သူတို့ ကုမ္ပဏီတွေကနေ ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ ဒေသခံတွေ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါး သန်းတစ်ထောင်တိတိ လှူပါမယ်တဲ့။ ခင်ဗျားတို့ ဆေးရုံကနေ လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေ စာရင်းပြုစုပြီး တင်ခိုင်းထားတာ အရင်တစ်ပါတ်တုန်းက ခင်ဗျားတင်တဲ့ စာရင်းထဲမှာ တန်ဖိုးသင့်ငွေတွေ မပါဘူး။ လိုတဲ့ပစ္စည်း အရေအတွက်နဲ့ တန်ရာတန်ဖိုးကို အကြမ်းဖြင်းသိရမှ ကျွန်တော်တို့ဘက်က သူတို့လှူမယ့် သန်းတစ်ထောင်နဲ့ ကွက်တိဖြစ်အောင် လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်လို့ရမှာပေါ့။ ခင်ဗျားတင်တဲ့ လျှောက်လွှာစာရွက်ကလေး နှစ်ရွက်နဲ့ သန်းတစ်ထောင်ဖိုးမပြည့်ရင် အလကားနေရင်း ကျွန်တော်တို့ နစ်နာနေပါ့မယ်ဗျာ။´
(ဗုဒ္ဓော..။ ကိုယ့်ခေါင်းထဲက သိသမျှတော့ အဲဒါအကုန်ပဲလေ။ တန်ရာတန်ဖိုးဆိုတာက ပါရာစီတမောလောက်၊ ဆောမျုလောက်ပဲ ကိုယ်ကသိတာ။ မမြင်ဖူး မသုံးဖူးတဲ့ စက်ပစ္စည်း ကိရိယာတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုသိချင် ဒေင်ဆရာဆီသွားမေးရမယ် ထင်ပါရဲ့။ နေပါစေလေ။ ဟန်ကိုယ့်ဖို့တဲ့။ ဒီလိုပဲ ဆက်ရွှီးရတာပ။)
`အဲဒီကိစ္စကတော့ ဆေးကုမ္ပဏီတွေဆီမှာ အက်စတီမိတ်တင်ခိုင်းလိုက်ပါ့မယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အတိအကျ ခန့်မှန်းပေးဖို့ ခက်ပါတယ်။´
`ခင်ဗျားကလည်း ကိုယ်သုံးမယ့် ပစ္စည်းမှ ကိုယ်တန်ဖိုးမသိဘူးဆိုရင် အလကားပေးမယ့်သူတွေ အားနာစရာကြီးဗျာ။ ခင်ဗျားဟာခင်ဗျား စုံစမ်းပြီး ပြန်တင်။ သန်းတစ်ထောင်မပြည့်သေးရင် တခြားဟာတွေ စဉ်းစားပြီးတင်။ ဆင်ဖြူတော် ပြုတ်စားချင်တောင် အိုးရှိမှ ဖြစ်တာဗျ။´
(ခံလိုက်ဟ ။ ခံလိုက်ဟ။ ဒါပါနဲ့ဆို တင်တင်နေတာ လေးငါးခါမကတော့ဘူး။ စာရွက်ဖိုးတင် မနည်းရှိနေပြီ။ ပြီးကျ ဘာမှလည်း မဟုတ်ပဲနဲ့။)
`ဟိုလေ…။ အဲဒီသန်းတစ်ထောင်လှူမယ့် အလှူရှင်ကြီးတွေဆီမှာ စက္ကူနဲ့ စာရေးကိရိယာစားရိတ် ကြိုတင်အသုံးငွေကလေးများ ထုတ်လို့ရမလားမသိဘူးနော်။´
`ဆရာရယ်။ ငါးထောင်တန်ပေးမယ့်သူကို တံဆိပ်ေါင်းဖိုး ပြားငါးဆယ် အမ်းစရာမရှိလို့ ငြင်းလွှတ်ရမယ့်ပုံပေါက်နေပြီ။ မနောက်ပါနဲ့ဗျာ။´
(တိန်..။ ခံရပြန်ပြီဟ။ အထွန့်တောင် မတက်ရဲတော့ဘူး။ စကားလမ်းကြောင်း ပြောင်းသွားအောင် တေတေဂနိတ်သိုင်းကွက်ကြီး ထုတ်သုံးလိုက်မယ်။ လာလေ့..။)
`…………. ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတော်သစ်ကြီးမှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးတွေ ချောမွေ့လာလို့ ဒေသထွက်ကုန်တွေကို ပြည်ပဈေးကွက်အထိအရောက်တင်ပို့ရောင်းချနိုင်လာတဲ့အခါ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းသစ်တွေ အဆက်မပြတ် ထွက်ပေါ်လာပြီဖြစ်လို့ ကျွန်တော်တို့ဒေသ အနေနဲ့လည်း ထွက်ကုန် ထုတ်ကုန်သယံဇာတတွေ တိုးတက်လာအောင်…..´
(တချက်လောက် အိပ်ငိုက်လိုက်တာ အိပ်မက်တွေ ဘာတွေတောင်မက်တယ်။ ထူးပါဘူး။ အပြင်မှာလည်း အိပ်မက်မက်ကောင်းတုန်း။ မီရာရထားနဲ့ အမြန်လိုက်မှ။ ဘာတဲ့ ဒေသထွက်ကုန်တဲ့။ ငရို့ဆီ ဘာတွေများ ပေါပါလိမ့်။ လုပ်စမ်းပါဦး။ သိပြီ။ သိပြိ။)
`ဥက္ကဌကြီးခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ဒေသမျာ အလျှံပယ်ထွက်တဲ့ ဒေသထွက်ကုန်တွေ အများကြိးရှိတယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ဥပမာ ရေထွက်ပစ္စည်းထဲကဆို ရေတက်ငါးဇင်ရိုင်းတွေ တယ်ပေါဆိုပဲ။ ဇွဲသီချင်းထဲမှာတောင် ပါသေး။ ပြီးတော့ ထီးတင်ထားတဲ့ တောင်ပို့ကြီးထဲက ဖွတ်တွေကလည်း အကောင်အကြီးကြီးနဲ့ ပေါမှပေါတဲ့။ အဲဒါတွေ ဂန္ဓာလရာဇ်ပြည်ကို ဂဏန်းကားနဲ့ အပြည့်တင်ရိုက်လို့ ရပါတယ်။´
ထိုအခါ ကိုယ့်လိုပဲ အိပ်ငိုက်နေသော မွေး/ရေကြီးနှင့် သစ်တောကြီးတို့မှာ လှုပ်နှိုးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပြိး..
`ဟုတ်..။ ကျွန်တော်တို့ ဌာနအကြီးအကဲဆီမှာ တင်ပြပြီး ခွင့်ပြုမိန့်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။´
`ငါးဇင်ရိုင်းတွေ ရေခဲရိုက်ဖို့အတွက် ရေခဲစက် ရေသန့်စင်စက်တွေ လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအတွက် .. မီး ….´
ဆက်မပြောရဲတော့ပဲ အသံတိမ်ဝင်သွားလေသည်။ မီးလင်းရေးကော်မီတီဥက္ကဌကမူ မျက်ထောင့်နီကြီးနှင့် ကြည့်နေလေ၏။ နေနှင့်ဦး။ ညကျမှ ဒင်းတစ်အိမ်ထဲ ကွက်မှောင်ချထားလိုက်မယ်ဟု တွေးနေဟန်ရှိ၏။ ခြင်းဝိုင်းကလေးစည်လာပြီမို့ အားပေးချင်စိတ်က မနေနိုင်ပြန်…
`ရေအားက စီမံကိန်းအင်ဂျင်နီယာကြီးကို တစ်ခုလောက် တင်ပြပါရစေ။ စီမံကိန်းမပြီးသေးခင် ဒေသတွင်းမီးသုံးစွဲမှု ဖူလုံအောင် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပေါပေါများများ ရနိုင်တဲ့ ကောက်ရိုးမီးမှ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ထုတ်လုပ်လို့ ရနိုင် မရနိုင် သိပါရစေ။ ဟုန်းကနဲတောက်ပြီး ငြိမ်းသွားတယ်ဆိုပေမယ့် အထင်သေးလို့မရဘူးလေ။ လူသန်းခြောက်ဆယ်ရှိရင် အဟုန်းပေါင်း သန်းခြောက်ဆယ် တက်လာမှာ..။ LED မီးသီးလေးလောက်တော့ ညလုံးပေါက်ထွန်းနိုင်လောက်တယ်။´
နဂိုကမှ ဘတ်ဂျက်မကျသဖြင့် အေသင်ချိုဆွေသီချင်းကို ကာရာအိုကေဆိုင်မှ အပိုင်ဝယ်ပြီး အမုန်းဆွဲနေသူ စီ/အင်ကြီးက…
`ခင်ဗျားအိမ်မှာ ရှိတဲ့ လူဆယ်ယောက် တပြိုင်တည်း ဟုန်းနိုင်တဲ့အခါ ကျုပ်ဆီလာခဲ့။ ဒိုင်နမိုဆင်ပေးလိုက်မယ်။´ ဟု ဘုတောလေသည်။
ထိုအခါ ဈေးကွက်ဂျာနယ်၊ ကြိးပွားရေးမဂ္ဂဇင်းတို့ကို အရည်ကျိုသောက်ထားသူ ဥက္ကဌကြီးမှ…
`အိုင်ဆေး။ ဒါက ဒီလိုရှိတယ်ဗျ။ ဒေသထွက်ကုန်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပုန်းပေါလအော ထွက်တိုင်းလည်း အကျိုးအမြတ်က များချင်မှများတာ။ အဓိက ကတော့ဗျာ။ ကိုယ့်ထွက်ကုန်ပစ္စည်းကို တန်ဖိုးမြင့်သထက်မြင့်အောင် စီးပွားရေးဗျူဟာတစ်ခုခုနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှ စိးပွားဖြစ်မှာဗျ။ မားကက်တင်းပေါ့ဗျာ။ မားကက်တင်း..။´
ထို့နောက် ပြောင်ရှင်း မင်းပိုင်သကွာဟူသော အပြုံးမျိုးဖြင့် သူ့စကားကို ထောက်ခံမည့်သူ စောင့်နေလေသည်။
(ကြာရိုးကို ဒါမျိုး လာချိုးလို့ကတော့ ဒီက လွှတ်အသည်းယားပါသလေ။ ဘာရမလဲ။ လာမစနဲ့။ ဒါန။ ကြည့်ထားလိုက်။)
`မှန်လိုက်တာ ဥက္ကဌရယ်။ အမြှော်အမြင် ရှိလိုက်လေ။ တကယ့်လက်တွေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ စမ္ပာနဂိုရ်သားတွေလောက် ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုကို ဈေးမကောင်းကောင်းအောင် တင်ရိုက်တတ်တဲ့သူ ကမ္ဘာမှာ မပေါ်သေးဘူး။ ထွက်ကုန်အရောင်းအ၀ယ် စီမံခန့်ခွဲမှုကို နိုင်ငံတော်က စံနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲလိုက်ရင် တရုတ်ကြီးတွေ ဂျပန်ကြီးတွေတောင် နောက်ကောက်ကျပြီး ငိုင်ဆင်းသွားရတာ။ သူတို့ခမျာ ဖုန်းတွေ ကားတွေကို ထုတ်ရုံသာ ထုတ်တတ်တာ။ ကျုပ်တို့လို ဈေးကောင်းရအောင်မှ မရောင်းတတ်ပဲနဲ့။ သူတို့ကားတစ်စီးလုံးတန်ဖိုးက ဒီကလူကြီးလက်ရေးနဲ့ စာရွက်ကလေး တစ်ရွက်လောက်တောင် ဈေးမရှိဘူး။ မယုံရင် ဆူဇူကီးကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးကို စမ္ပာနဂိုရ်မှာ သူထုတ်ထားတဲ့ကား သူပြန်ဝယ်စီးခိုင်းလိုက်။ မျက်ဖြူဆိုက်မသွားတော့ ပြောချင်တိုင်းပြော။´
ထိုအခါ စီးပွား/ကူးသန်းကြီးက အားတက်လာပြီး..
`အဲဒီဗျူဟာအတိုင်းကစားရမှာဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း တနိုင်တပိုင် ထင်းပါမစ်၊ မှိုပါမစ်၊ မျှစ်ပါမစ်တွေ လျှောက်ခိုင်းရ မကောင်းဘူးလား။ သစ်တောကြီးက ဘယ်လို သဘောရသလဲ။´
`အထက်ကို တင်ပြပြိး ကန့်ကွက်ရန်မရှိက အကြောင်းပြန်ပါ့မယ်။ သစ်ပါမစ် မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဖြစ်နိုင်လောက်ပါရဲ့။´
ဥက္ကဌကြီးမှ စကားလမ်းကြောင်းကို ပြန်လည်တည့်မတ်ရန် အချိန်ကျပြီဟု ယူဆကာ..
« Last Edit: November 12, 2011, 07:14:22 AM by drlanmadawthar »
« Reply #41 on: November 12, 2011, 07:15:22 AM »
`ဒေသတွင်း စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုပြီးရင် ဆက်လက်ဆွေးနွေးရမယ့် အကြောင်းအရာကတော့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။´
´ဒီနေရာမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုဆိုတာကို ဘယ်လို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြမလဲဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ဒေသရဲ့စံကို သူများတွေဆီ လိုက်တိုင်းလို့မရသလို သူများတိုင်းပြည်က စံတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ လာတိုင်းလို့ ဘယ်ရပါ့မလဲ။´
`ဟုတ်တာပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့အဘဆိုရင် ပါဂျဲရိုးကလေးတစ်စီးမှ မစီးနိုင်အောင် ဆင်းရဲရသလားဆိုပြီး စိတ်ဓါတ်တွေ ကျနေတာ။´ ဟာ စည်ပင်ကြီးမှ ၀င်ထောက်ခံလေသည်။
`ဒါကတော့ဗျာ။ တစ်နေ့ထမင်းသုံးနပ်မှန်အောင်စားနိုင်ပြီး ပုဆိုး၊ ထမီ၊ ဘိနပ် စုံအောင် ၀တ်နိုင်ရင် ဘယ်ဆင်းရဲတယ် ပြောလို့ ဖြစ်မှာတုန်း။ ထမင်းတနပ် တစ်ထောင်နဲ့ တွက်ဦး။ စားစားရိတ်ချည့်ပဲ တနေ့ သုံးလေးဒေါ်လာ ၀င်ငွေရှိလို့ပေါ့။ ဒါဆို ဆင်းရဲတယ်လို့ မခေါ်နိုင်တော့ဘူးလေ။´ ရာဖြတ်ကြီးမှ အကဲဖြတ်၏။
`ဒီလိုလုပ်ရအောင်ဗျာ။ စစ်တမ်းကောက်မှ ကိန်းဂဏန်းအတိအကျနဲ့ ထွက်လာမှာပေါ့။ လ၀ကကြီးနဲ့ ရာအိမ်မှူးကြီးက တနေ့သုံးခါ တစ်အိမ်တက်ဆင်း ထမင်းစားပြီးပြီလား။ ဘာဟင်းနဲ့ စားလဲ။ စာရင်းပြုစုလိုက်။ ၃ကြီမ်ပြည့်တဲ့သူကို ဆင်းရဲသားစာရင်းကထုတ်၊ နှစ်ကြိမ်ဆို အနည်းငယ်ဆင်းရဲ။ တစ်ကြိမ်တည်းစားရင် အလွန့်အလွန်ဆင်းရဲ။ ဥပုသ်သည်တွေတော့ မပါကြေးနော်။´
ထို့နောက် ပြောင်ရှင်း မင်းပိုင်သကွာ ဟူသော အပြုံးမျိုးဖြင့် သူ့စကားကို ထောက်ခံမည့်သူ စောင့်နေလေသည်။ သို့သော် သာ-ထွန်း-ပြန့်ကြီးက သူ့ဘက်ကိုတော့ လုံအောင် ကာရပြန်လေသည်။
`ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေကိုလည်း ထည့်မကောက်ကြေးဗျာ။ သူတို့က ညစာဘုဉ်းပေးတာမှ မဟုတ်ပဲနဲ့။´
`ကျောင်းအောက်မှာ ကပ်ရပ်တောင်းစားနေရတဲ့ အသည် ကယ်ပါတွေကတော့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ လွတ်မှာ မဟုတ်ဘူးဗျ။ လူကြီးလာမယ်ဆိုရင်တော့ ဖွက်ထားလိုက်မယ်လေ။´
ကယ်တင်ရှင်ကတော့ စည်ပင်ကြီးပဲ ဖြစ်ပါသည်။
`လွယ်ပါတယ်ဗျာ။ သူတို့ကို လိုင်စင်ဓါတ်ပုံရိုက်၊ ကဒ်ပြားကလေးတစ်ခုစီလုပ်ပေးထား။ လည်ပင်းမှာ အလှူခံလုပ်သားများကောင်စီအသင်းဝင်လို့ ဆွဲပေးထားလိုက်။ အရပ်ထဲကလူတွေ ကယ်ပါ၊ သူတောင်းစား ခေါ်ရင် ဒဏ်ရိုက်လိုက်။ ဒါဆို သူတောင်းစားတို့ အလုပ်လက်မဲ့တို့ ဘယ်ရှိတော့မလဲ။ သူတို့လည်း သူတို့လုပ်အားနဲ့ တောင်းရမ်းရှာဖွေစားသောက်ရတာ။ နေ့စဉ်ဝင်ငွေရှိတယ်။´
`ကောင်းလိုက်တဲ့ အိုင်ဒီယာဗျာ။ ဒါဆိုရင် သူတောင်းစားကင်းစင် စမ္ပာတခွင် ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု၊ စမ္ပာနဂိုရ်တပြည်လုံး ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လုံးဝ ပပျောက်ရမည်ဆိုပြီး ဆိုင်းဘုတ်တစ်ခု ရေးပြိးထောင်လို့ရပြီ။´
ထို့နောက် ပြောင်ရှင်း မင်းပိုင်သကွာ ဟူသော အပြုံးမျိုးဖြင့်…
` `နောက်တစ်ခုက ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာ ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ နည်းပညာတွေ ထွန်းကားပြီး အရှိန်အဟုန်နဲ့ လျှင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနေတဲ့ အိုင်တီခေတ်ကြီးကို ရောက်နေပြီဗျ။ ကျုပ်တို့ စမ္ပာနဂိုရ်မှာလည်း မျက်ခြေမပြတ်အောင် အမီလိုက်ဖို့ လိုတယ်။´
(ရော်.. ခက်တော့နေပါပြီ။ ခရမ်းချဉ်မီးသီးမလင်းတဲ့ အရပ်မှာ အိုင်ပေါ့နာနို လာရောင်းနေပါပေါ့။ တစ်ရက်ခြားလာတဲ့မီးကလေးနဲ့ မိုးလေ၀သတောင် မှန်မှန်မကြည့်နိုင်။ အိုင်တီခေတ်ကြီးကို အမီလိုက်ရမယ်လား။ ရရမှာပေါ့.)
`ဟုတ်ကဲ့..။ ဥက္ကဌရုံးမှာ အိုင်ပီစတား တစ်လုံးလောက် တပ်လိုက်ပါလားဗျာ။ မိတာ မမိတာ အပထား။ ဘာရယ်ဟုတ်ဘူးလေ။ လူရှိန်တာပေါ့။´
`ခင်ဗျားတို့ အဲဒါတွေ ခက်တာပေါ့။ အင်တာနက်ဆိုင်သွားမှ အွန်လိုင်းပေါ်ကအကြောင်း သိရမှာလား။ ကျုပ်ဆို ဂျာနယ်အသစ်ထွက်တာနဲ့ ဆိုင်မှာ အလကားသွားဖတ်တယ်။ ဘာမဆို အကုန် အပ်တူဒိတ်။ ဟိုတလောက ခင်ဗျားတို့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ပွက်လောရိုက်နေတဲ့ ဤရာဝတေ ဂယက်ကြီးကြောင့် ကျုပ်တို့ စမ္ပာနဂိုရ်မှာ ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားရမယ်ဆိုတာတောင် အကုန်သိတယ်။ ရာသီဥတုတွေ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးလာလို့ မိုးနဲ့နွားသိုး အစိုးမရရင် မြစ်ရေတွေ ခန်းချင်ခန်းမယ်။ လျှံချင် လျှံမယ်။ အရေးကြီးတာက ညောင်ဦးမှာ ကမ်းပါးပြိုတဲ့အခါ ကျုပ်တို့ စမ္ပာနဂိုရ်က နွားမတွေ ပေါင်ကျိုးတတ်သတဲ့။ ဒါကြောင့် ကျုပ်က စမ္ပာနဂိုရ် မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ နွားမပျိုများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းကြီး ဖွဲ့ပြီးသွားပြီဗျ။ ဘတ်ဂျက်တောင် ကျတော့မယ်။ အဲဒါ ဒဇက်ဆာ မဲနိတ်ဂျမန့် ခေါ်တယ်။ ဖြစ်ပြီးမှ လုပ်တာထက်စာရင် မဖြစ်ခင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်လေ။´
ထို့နောက်.. ပြောင်ရှင်း မင်း ပိုင်သကွာ ဟု ….။
`နိဂုံးချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့ သန့်ရှင်းသော ၀ိညာဉ်တော် အဲလေ ဟုတ်ပေါင် စမ္ပာနဂိုရ်အစိုးရအဖွဲ့ကြီးအပေါ်မှာ ပြည်ပအားကိုး ပုဆိန်ရိုးတွေက မဟုတ်တမ်းတရား ထိပါး ပြောဆို ရေးသားနေတာတွေကို ကျွန်တော်တို့ကလည်း မီဒီယာနဲ့ပဲ ပြန်လည်တုန့်ပြန်ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ပြန်/ဆက်ကြီးက ဦးဆောင်ပြီး ညနေလက်ဘက်ရည်ဆိုင်မှာ ဥက္ကဌကြီး ချောကြောင်း လှကြောင်း တော်ကြောင်း မှန်ကြောင်း လူမကြားကြားအောင် အော်ပြောရလိမ့်မယ်။ အား/ကာကြီးက ဥက္ကဌဖလား ဘောလုံးပွဲလုပ်ပြိး ရွှေရေသန့်ဗူးဆု ပေးမယ်လို့ သတင်းထုတ်ပြန်ပါ။ ဆက်သွယ်ရေးကြီး ရန်ကုန်ပြန်တဲ့အခါ နန္ဒာလှိုင်နဲ့ အေးအေးခိုင်ကို စမ္ပာနဂိုရ်မြို့ကြီးရဲ သတင်းပလင်းတွေကို တယ်လီဖုန်းတော်ကီ တစ်ခွေသွင်းလာခဲ့။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအားလုံးကို www.sanparnago.com မှာ တင်ထားလိုက်။ ရန်ကုန်က KMD တက်နေတဲ့ သင်တန်းသားတွေကို တနေ့သုံးခါ လိုက်ခ်လုပ်ခိုင်းပြီး ကွန်မန့်တွေ ထပ်ခါတလဲလဲ တင်ကြပစေ။ မှတ်မိပြီနော်။ နောက်တစ်ပါတ်။ ဒီအချိန်..။ ဒီနေရာမှာ..။ ဒါပဲ..။ ဒါပဲ..။´
စကားအဆုံးတွင် ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးအရွယ် လူကြီးမင်းများအားလုံး ကျောင်းဆင်းခေါင်းလောင်းသံကြားသော သူငယ်တန်းကျောင်းသားလေးများသဖွယ် ၀မ်းသာအားရ တိုးဝှေ့ ထွက်လာကြလေသည်။ ထိုအခိုက် အလိုက်မသိသောအလှူခံမဏ္ဍပ်တစ်ခုမှ အမည်ဖော်ပြခွင့်မရှိတော့သော နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ကြီး၏ ထုတ်လွှင့်ခွင့်မပြုတော့သည့် လူကြိုက်များတေးသီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် ဖွင့်လိုက်သောအခါတွင်မူကား…။
`စကားကမြင့်မိုရ် အကြွားကဖြင့်ပို.. ကတိတွေပေးထားတာလည်း လွန်နေပြီ ရှင့်အကို။ တနေ့ရွှေ တနေ့ငွေ တွေ့တဲ့အခါတိုင်း သူဆို..။ နောက်ကွယ်ကျရင် မေ့လို့နေတဲ့ ကိုလူပျို။ ဘ၀င်မကျလို့ ကျွန်မရင်ကဖို..။ အရင်လိုမဟုတ်သူ မောင့်ကို..။ ကြည့်ရတာ ခြေလှမ်းပျက်သကို။ ကျွန်မဘ၀င်ခိုက်အောင် ပြောလိုက်ပုံက စိန်နားကပ်ကြီး ပန်ရမလို … စိန်နားကပ်ကြီး ပန်ရမလို။´
(စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်ကောင်များသာဖြစ်ပါ၍ အပြင်တွင် တကယ်မရှိပါကြောင်း)
Dr. soe min's fb
« Reply #42 on: November 27, 2011, 08:39:03 AM »
နိုင်ငံအတွင်း တစ်ခုတည်းသော ဆက်သွယ်ရေးဌာနဖြစ်သည့် လူကြီးမင်းတို့၏ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများကို ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မှီတင်းနေထိုင်သူအပေါင်း သုံးစွဲနေရ သည်မှာ ငြင်းမရသောအချက် ဖြစ်ပါသည်။
အင်တာနက်သုံးစွဲရရန်မှာ ပါဝါမီး လင်းရမည်။ DSL မီးလည်းလင်းပြီး ငြိမ်နေရမည်။ ETH/ACT မီးစိမ်းလေးက တဖျတ်ဖျတ် လှုပ်နေရမည်ဟု သိထားသော်လည်း
ယခုအခါ ငြိမ်ရမည့် DSL မီးက မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ဖြစ်ပြီး မှိတ်တုတ် မှိတ်တုတ် ဖြစ်ရမည့် EHT/ACT မီးက ငြိမ်နေသဖြင့် ဟိုဟာပြုရမယ့်ဟာက ဟိုဟာမပြုဘဲ ဟိုဟာမပြုရမယ့်ဟာ ပြုနေတယ်ဟု ပြောရမလို ဖြစ်နေပါသည်။
(စာကြွင်း၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုသောစကားမှာ ဈေးအလွန်ပေါသော၊ ကုန်ကျစရိတ် အသက်သာဆုံးသော စကားဖြစ်သည်ဟု အစိုးရအရာရှိတစ်ဦးက ကျွန်တော့အား အငေါ်တူးပြီး ပြောဖူးသော်လည်း ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့် ထိုစကားမှလွဲပြီး တခြားပြောစရာ စကား မရှိ သေးသဖြင့် သည်းခံပေးပါခင်ဗျား)။
CREDIT To One Of the Journal from Myanmar
« Last Edit: November 29, 2011, 11:38:29 PM by Prof:ဆိတ်ဖွား »
« Reply #43 on: December 19, 2011, 09:14:01 AM »
ကျနော် ကြိုက်၍ ကျောင်းဝင်းမှာ ရှဲပါသည်ခင်ဗျ။
ရေးသူမှာ ယာမားရှီး ပို့တင်ထားသူမှာ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ​‌​ ဖြစ်ပါသည်။
(Credited to all.)
ဖိုရန် နှင့်ကိုက်ညီမှုမရှိဟုထင်ပါလျှင် ဖျက်ပစ်နိုင်ပါသည်။
ဒီည မိုးတွေ ရွာလိုက်တာ တအားပဲ။ ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ရီဂျင်စီ (Regency) ဆိုတဲ့ ဘရန်ဒီတပြားနဲ့ ဇိမ်ယူနေတယ်။ လေကလေးအတိုက် မျက်စိတွေက မှေးလာတယ်။
အိမ်နားက ၀ယ်ထားတဲ့ ခွေးသားခြောက်အမြီးကလည်း ကောင်းလိုက်တာ။ ခွေးသားခြောက်လေးတကိုက်ကိုက် ဘရန်ဒီလေးတကြိုက် မော့လိုက်နဲ့ အိပ်ပျော်သွားတယ်။
နှိုးသံကြားတော့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တယ်။ လားလား နတ်မိမယ်လေးနှစ်ပါး ပါလား။ အဟဲ အမူးတောင် ပြေသွားတယ်။
တယောက်က မိုးဟေကိုနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်။ တယောက်က ၀တ်မှုန်ရွှေရည် အကြီးစား။
“ဦး သူ့ကို မသိပါလား”
“ဟိုရောက်ရင် သိမှာပါ အလုပ်အပ်မလို့ပါ”
ကျနော်က နာမည်ကြီး ဆောက်လုပ်ရေး ကန်ထရိုက်တာတဦး။ မချောနှစ်ယောက်နောက် ကောက်ကောက်ပါအောင် လိုက်သွားခဲ့တယ်။
ကားကြီးကလည်း ကောင်းလိုက်တာ။ ငြိမ့်နေရော။ မိုးဟေကိုက ကားမောင်းတယ်။
သူ့ဘေးမှာ ၀တ်မှုန်။ နောက်ခန်းမှာက ကျနော်။ မချောလေးတွေကို ရှုစားရင်း အိပ်ပျော်သွားပြန်ရော။
ဟင် ... ငါဘယ်ရောက်နေပါလိမ့်။ ဇာတ်ထဲက နတ်ဝတ်နတ်စားတွေ ၀တ်ထားပြီး လူဆိုးရုပ်ပေါက်နေတဲ့ လူနှစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
“တော်စမ်း မရှိတော့ဘူး၊ ခင်ဗျား အခု ငရဲပြည်ရောက်နေတာ”
“ဗျာ ... ငါ့မှာ ဘာအပြစ်ရှိလို့်တုန်း”
“ရှိရှိ မရှိရှိ ယမမင်းကြီးနဲ့ တွေ့လိုက်ပါ”
“အိမ်း မောင်မင်း ငရဲပြည် ရောက်နေပြီ”
“မောင်မင်းကို ခေါ်တာက အလုပ်အပ်မလို့ပါ”
ယမမင်းကတောင် ခေါ်အလုပ်အပ်တော့ ငရဲကျစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီး စိတ်အေးသွားတယ်။
“အလုပ်အကြောင်း မပြောခင် ငရဲပြည်ကြီးကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး၊ ဗဟုသုတပေါ့”
ငရဲမင်းကြီးနဲ့ ငရဲပြည်ကြီးကို လှည့်ပတ်ကြည့်ရှုလိုက်တယ်။
“ဒါက ငရဲကြီး ပထမထပ်”
“ဘာငရဲလို့ ခေါ်ပါသလဲ ယမမင်းကြီး”
ယမမင်းကြီးပြောမှ သေသေချာချာ ကြည့်မိတယ်။ ငရဲသားတွေ ပြေးနေလိုက်ကြတာ။
သူတို့အနောက်မှာက ကြောက်စရာ ကောင်းလွန်းတဲ့ ငရဲထိန်းတွေ လက်နက်ပေါင်းစုံကိုင်လို့ လိုက်ပစ်နေကြရော။ ငရဲခွေးတွေကလည်း လိုက်နေကြတယ်။
“ဒိုင်းဒိုင်း ၀ုန်းဝုန်း ဒက်ဒက် ဒက်ဒက် ဒုန်းဒုန်း အုန်းအုန်း”
ငရဲသားတွေ ပက်ပက်စက်စက်ကို သေကြတယ်။ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ကို သေကြတယ်။ အော်ဟစ်ညဉ်းတွားသံတွေက နားထဲမှာ အူထွက်သွားတယ်။
ခွေးတွေကလည်း လဲနေတဲ့ကောင်တွေကို ၀ိုင်းဆွဲကြတယ်။ စုတ်ပြတ်သွားအောင် ကိုက်ခဲကြတယ်။
ဟော ...။ သေပြီးသားကောင်တွေ ပြန်ရှင်လာပြန်ရော။ ရှင်လာပြန်တော့ ငရဲထိန်းတွေက လိုက်ပစ်ကြပြန်ရော။ သွေးသံရဲရဲနဲ့ သေကြပြန်ရော။ သနားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
“ဘာအပြစ်များ လုပ်မိလို့တုန်း ငရဲမင်းကြီးရယ်”
“ဒီလိုမြင်ကွင်း မောင်မင်း ဘယ်မှာမြင်ဖူးသတုန်း”
“အိမ်း အဲဒီ ငရဲသားတွေဟာ အရင်ဘ၀က လက်နက်မဲ့တဲ့ လူတွေကို မတရား သတ်ဖြတ်ထားတဲ့အတွက် ငရဲခံနေကြရတာ။
ကျုပ်လုပ်တာ မဟုတ်ဖူးနော်။ သူတို့ မကောင်းတဲ့ စိတ်ကံကြောင့် ခံနေရတာ။ ဒီကောင်တွေက နိုင်ငံတကာက ငရဲသားတွေပေါ့။
လူထုက လက်နက်မဲ့ တောင်းဆိုဆန္ဒပြတာကို အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းခဲ့တဲ့ကောင်တွေ အများကြီးပဲ။ အပြစ်ခံနေရတာ”
“ဘာငရဲလို့ နာမည်ပေးထားတာလဲ ယမမင်းကြီး”
“ခိုင်းနွားငရဲ။ အာဏာရှင်တိုင်းပြည်တွေမှာ ဒီအပြစ်ကျူးလွန်ကြတာ များတယ်။ အာဏာရှင်ခိုင်းလို့ လုပ်ရတာပါ။ နောက်မမိုက်တော့ပါလို့ အော်အော်နေကြတာ။
ဟိုဆက်ဒမ်တို့အဖွဲ့ဆို အသံကျယ်ဆုံး။ မောင်မင်း သံဝေဂယူနော်”
“ကဲ နောက်တထပ်။ ဓာတ်လှေကားနဲ့ ဆင်းကြရအောင်”
ငရဲကြီးဒုတိယထပ် ရောက်ပြန်ပြီ။ ယမမင်းကြီးက ...
ကြည့်လိုက်တော့ ငရဲထိန်းတွေက ငရဲသားတွေကို သစ်တုံးကြီးတွေကို လွှနဲ့ဖြတ်သလိုကို ဖြတ်နေကြတာ။
ငရဲသားတွေ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ထွက်ကာ အပိုင်းပိုင်း အတစ်တစ်ဖြစ်ကာ သေပွဲဝင်ကြတယ်။ နောက်ပြန်ရှင်လာကြပြန်ရော။
ငရဲထိန်းတွေက သစ်ပင်ခုတ်လှဲသလိုမျိုး လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ခုတ်လှဲပစ်တယ်။
နောက် အပိုင်းပိုင်း ခုတ်ထစ်ပြန်ရော။ နာကျင်စွာ အော်ဟစ်သံကြီးတွေ ပေါ်ထွက်လာတယ်။
သစ်တောတွေကို ခုတ်လှဲဖျက်ဆီးပြီး ကိုယ်ကျိုးမရှာတော့ပါဘူး။ ယမမင်းကြီးရေ။ သနားပါ။ တိုင်းပြည်တိုးတက်အောင် ၀င်ငွေရှာမိတာပါ။
ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်အောင်ပါဘုရား။ ကိုယ်ကျိုးနည်းနည်းလေးတော့ ပါတာပေါ့ဘုရား။ မိသားစုရှိလို့ပါ ဘုရား။ ပေါင်းစုံကို အော်နေကြရော။
ငရဲထိန်းတွေက ခပ်တည်တည်နဲ့ သစ်ပင်ကို အတုံးတုံး ဖြစ်သွားအောင် လုပ်သလိုမျိုး ခုတ်ထစ်နေကြတာ၊ လွှနဲ့ တဂျိဂျိ ဖြတ်ဆွဲနေကြတာ သွားတောင်ကျိန်းလာတယ်။
ဆက်မကြည့်ရဲတော့။ မြင်ဘူးတဲ့ သစ်သူဌေးကြီးတွေ ပါနေသလိုလို။ သြော် လူ့ဘ၀ ချမ်းသာတာ ခဏပါလား။
ငါ အဲဒီလောက် မမိုက်သေးလို့ တော်သေးတာပေါ့။ တွေးနေမိတယ်။ ကျောထဲတော့ တချမ်းချမ်း ...။
ဒုတိယအထပ်ပြီးတော့ တတိယအထပ် ရောက်ပြန်ရော။
“သန်းဥတုပ်ငရဲ” တဲ့ ယမမင်းကြီးက ပြောတယ်။
ပြေးနေလိုက်တာ။ ငရဲသားတွေ။ သူတို့နောက်ကိုတော့ သံတောင်ကြီးတွေက လိုက်နေရာ။ ဘယ်ပြေးပြေး မလွတ်။ အရပ်လေးမျက်နှာစလုံးမှာ သံတောင်ကြီးတွေက တလိမ့်လိမ့်နဲ့။
အိုး ... မီလာတဲ့အခါ ဖိပြားလိုက်တာများ။ ငရဲသားတွေမှာ သန်းဥတုတ်သလို သေကုန်ကြရော။ သေပြီးတော့ ပြန်ရှင်။ သံတောင်တွေက ဖိချေ။ ပြီးကို မပြီးတော့ဘူး။
လူတယောက်။ ကဒါဖီနဲ့ ဆင်တယ်။ မျက်နှာလေးထောင့်။ အရုပ်ဆိုးဆိုး။ အော်နေတာက စိတ်ဝင်စားစရာ။ နောက်ဆိုရင် လူတွေကို ဖိနှိပ်ပြီး မအုပ်ချုပ်တော့ပါဘူး။ နောင်တရပါပြီ။
သြော် ... သနားစရာကောင်းလိုက်တာ။ နောက်အော်သံတွေ ပျောက်သွားတယ်။ သံတောင်ကြီးတွေက ဖိချေလိုက်ပြန်ရော။
မင်းစည်းစိမ်ဆိုတာ သမုဒ္ဒရာအထက် ခဏပွက်တဲ့ ရေပွက်ပမာပါလားလို့ တွေးနေမိတယ်။
(၄) မီး ၀ါး
အော်ဟစ်ငိုကြွေးသံတွေက အခုခေတ် ဆူညံဂီတအသံတွေထက် အဆပေါင်းများစွာ ကျယ်တယ်။ ငရဲသားတွေ အော်ဟစ် ငိုကြွေးနေကြတယ်။
မီိးတောက်တွေကလည်း ဟုန်းဟုန်းထနေတယ်။ သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကို လောင်ကျွမ်းနေလိုက်တာ။
မျက်စိပေါက်၊ နှာခေါင်းပေါက်၊ ပါးစပ်ပေါက်၊ ဖင်ပေါက် ... စတဲ့ ဒွာရကိုးပေါက်အထဲ မီးလျှံတွေ အတင်းဝင်ပြီး လောင်ကျွမ်းနေရော။
“ဘယ်လိုလူတွေ ဒီငရဲရောက်လဲ ဘုရား”
“သူများ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျအောင် လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ကောင်တွေ ကျတဲ့ငရဲ။ သောက်မြင်ကပ်စရာ ကောင်းတယ်။ ဟိုကောင်တွေ အော်နေတာ နားထောင်ကြည့်စမ်း”
ကျနော် လစာမလောက်လို့ မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးရမှာ ညစ်ထားမိတယ်။ သူများ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ် ကျစေမိတာ နောင်တရပါပြီဘုရား။ အား အား အား။ ပူလိုက်တာ။
အခုဆိုရင် လူ့ပြည်ကျန်ခဲ့တဲ့ ဘော်ဒါတွေ သွေးနှောနဲ့ပဲ လုပ်စားနေရပြီ။ ကျန်ဂွင်ပျောက်ပြီလို့ အော်နေကြတာ။ ကျနော်ထင်တယ်၊ ထိုင်းလ၀ကတွေ အများစုဖြစ်မယ်။
တော်တော်ဆိုးတဲ့ကောင်တွေ ခံရတာ နည်းသေး။
နောက် ငိုချင်းသည်တယောက်။ ကျနော်တို့က အီသီယိုပီးယားက အလွမ်းသမားလေးတွေပါ။ ပါမစ်ဗန်းပြ လုပ်စားလိုက်တာ ငါတို့တစုပဲ ချမ်းသာပြီး လူတွေ ငတ်ကုန်တာ နောင်တရပါပြီ။
ဗိုက်ဆာလွန်းလို့ အစာလေး နည်းနည်းကျွှေးပါလို့ ပါးစပ်ဟလိုက်တာနဲ့ မီးတောက်တွေက အတင်းတိုးဝင်သွားတယ်။ အစာအမှတ်နဲ့ ဟပ်လိုက်တော့။ အားပါးပါး ပူလိုက်တာ။ ရေရေပေးပါ။ ဒီလိုအော်လည်း ရေမရဘဲ မီးတောက်တွေက ပါးစပ်အထဲ ၀င်သွားပြန်ရော။ အောင်မြတ်လေး။ မီးကို စားနေရတဲ့ ဘ၀ပါလား။ သနားစရာ။
နောက်ငရဲသားတကောင် အော်နေတာက ...
နောက်စားရင်း မစစ်တော့ပါဘူး။ စစ်ရင်း မစားတော့ပါဘူး။ မီးတောက်မီးလျှံတွေက ပါးစပ်ပေါက်အထဲ ၀င်ရောက် လောင်ကျွမ်းနေတော့။ ဘရိတ်ဒန့်စ်ကသလို။
တီကောင် ဆားတွန့်သလို။ ကြည့်လို့ကိုမကောင်း။ ငိုနေရော။ ဆက်ငိုပေါ့လေ။
ဒီငရဲမှာ ငိုချင်းသည်တွေ များလှတယ်။ နောက်ထပ်မကြားချင်တော့။ စိတ်ညစ်လို့ ...။
“၀ါးငရဲပေါ့ ယမမင်းကြီး ဘုရား”
“အခုတော့ မီးတွေ ၀ါးနေရတာ မြင်ပြီနော်။ မင်းလည်း သိပ်မ၀ါးနဲ့နော်”
“မ၀ါးရဲတော့ပါဘူး ဘုရား။ ကွမ်းယာတော့ ၀ါးခွင့်ပြုပါ ပါးစပ်နံလွန်းလို့ပါ”
ယမမင်းကြီး ကျနော့် အာပုတ်စော်မိပြီး အန်ချင်သွားပုံရတယ်။
အိတ်ကပ်အထဲက ကွမ်းယာထုတ်ပြီး ၀ါးလိုက်တယ်။
“ငါ့ တစ်ယာ ပေးစမ်း။ မြင်းဆေးတော့ မပါစေနဲ့နော်”
ကွမ်းယာကိုယ်စီဝါးရင်း စက်လှေကားစီးကာ ငရဲကြီးငါးထပ်မြောက်ကို ရောက်ပြန်ရော။ မီးခိုးတွေနဲ့ ငရဲသားမဲမဲကြီးတွေကို တွေ့ပြန်တယ်။ အရုပ်အဆိုးဆုံး ငရဲသားတွေပဲ။
တခြားဘုံက ငရဲသားတွေ သူတို့ထက် ဖြောင့်တယ်။ ကယ်ကြပါ။ ကယ်ကြပါ။ သနားစဖွယ် အော်ဟစ်နေတဲ့ ငရဲသားတွေ။
အသက်ရှူလည်း ကျပ်နေကြတယ်။ မီးခိုးတွေက သူတို့တကိုယ်လုံးကို တိုးဝင်နေရော။ မီးခိုးဟပ်ပြီး မဲခြစ်တူးနေကြတယ်။
လူ့ဘ၀တုန်းက စက်ရုံကြီးတွေ၊ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းကြီးတွေ၊ စက်မှုဇုန်ကြီးတွေ ဆောက်ပြီး စီးပွားရှာမိတာ နောင်တရပါပြီ။ ထိခိုက်တဲ့ လူတွေကိုလည်း လျော်ကြေးပေးပြီးပါပြီ။
ယမမင်းကြီးက အမြင်ကပ်ကပ်နဲ့ ပြောလိုက်တယ်။ နှာခေါင်းရှည်ရှည် ငရဲသားတွေ ပိုများတယ်။
“မှန်ပ။ သဘာ၀၀န်းကျင်ကို ဖျက်ဆီးပြီး စီးပွားရှာလိုစိတ် ပျောက်သွားပါပြီ ဘုရား”
“အိမ်း သာဓု သာဓု။ နှစ်ခွန်းပဲခေါ်မယ်”
သာဓုခေါ်ရင်း ခြောက်ထပ်မြောက်ဆီ ဆင်းကြပြန်တယ်။
ဒီငရဲမှာတော့ ငရဲသားတွေမှာ မီးဟုန်းဟုန်းတောက်လောင်နေတဲ့ သံချောင်းကြီးတွေအထဲ မလှုပ်နိုင်အောင် ထိုးစိုက်ထားခံရပြီး တကိုယ်လုံး ကြက်ကင်လို မီးမြှိုက်ခံနေရတယ်။
မီးမြှိုက်ထားတယ်ဆိုတော့ တကိုယ်လုံး အရေခွံတွေ လန်ပြီး ရဲရဲကို နီနေရော။ သွေးတွေ တစိုစိုနဲ့။ အရည်တွေ တရွှဲရွှဲ။ ရွံစရာကြီး။
“ဘယ်လိုလူတွေ ခံရတဲ့ ငရဲလဲ ဘုရား။ အော်တောင်မအော်နိုင်ကြပါလား”
“ရှင်းပါတယ်ကွာ။ ဒီကောင်တွေဟာ လူ့ဘ၀တုန်းက အပြစ်မဲ့လူတွေကို မလှုပ်နိုင်၊ မအော်နိုင်အောင် ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ခဲ့ကြတဲ့ ကောင်တွေပေါ့။
ဂျူးလူမျိူးတွေကို သတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ ဟစ်တလာတို့လိုကောင်တွေ ဒီငရဲမှာ ရှိတယ်”
“လူတွေကိုများ ကြက်ကလေး၊ ငှက်ကလေးလို ဖမ်းပြီး နှိပ်စက်ချင်တဲ့ကောင်တွေ။ ဒါတောင် မျိုးချစ်စိတ်တဲ့။
ထွီ ... ရွံစရာကောင်းလိုက်တာ။ မှတ်ထား မျိုးချစ်စိတ်ထက် လူချစ်စိတ်က ပိုအရေးကြီးတယ်ကွ။ သောက်ပေါ ဟစ်တလာ။ ခံရတာတောင် နည်းသေး။
သွားမယ်ကွာ။ လာမြန်မြန်။ အော်ဂလီဆန်လွန်းလို့။ ကြက်ကင်ငရဲတဲ့။ မှတ်”
ယမမင်းကြီးနောက် ခပ်ကုပ်ကုပ်လိုက်ရင်း သတ္တမမြောက်အထပ်ကို ရောက်သွားရော။ ပိုဆိုး။
ခြောက်ထပ်မြောက်ထက်သာတဲ့ ငရဲ။ သံတောင်ကြီးတတောင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေတယ်။ သံတောင်အောက်ခြေမှာတော့ သံတံကျင်တွေ စိုက်ထူထားတယ်။
ငရဲသားတွေကို ငရဲထိန်းတွေက သံတောင်ပေါ် ပစ္စည်းအထုပ်ထမ်းပြီး တက်ခိုင်းတယ်။ မတက်တဲ့ အကောင်တွေကို ရိုက်ပုတ်ကြိမ်းမောင်းတက်ခိုင်းတယ်။
သံတောင်ပေါ်လည်းရောက်ရော နာဂစ်ထက် အဆပေါင်းများစွာသာတဲ့ လေမုန်တိုင်းကြီးက တိုက်ချပစ်လိုက်တယ်။ ပြုတ်ကျလာကြရော။
တံကျင်ချွန်ချွန်အပေါ် ခြေကားယား လက်ကားယား ပြုတ်ကျ စူးကုန်ကြရော။ အား အား အား အော်နေကြရော။
နောက်မဆွဲတောပါ့ဘူးဆိုလား နောက်မဆဲတော့ပါဘူးဆိုလား ... စတဲ့ အသံတွေကို ကြားလိုက်မိသလို။
“အဓမ္မ ငရဲပေါ့ကွ။ မင်းမြင်တယ်မဟုတ်လား။ အဓမ္မကို တောင်ပေါ် ရိုက်ပုတ်တင်နေတာ”
နာမည်အကြီးဆုံး အ၀ီစိတွင်း၊ အဲ ... အ၀ီစိငရဲ ရောက်ပေပြီ။ ဘာများ ထူးခြားပါလိမ့်။
ငရဲဘုံတခုလုံး မီးလျှံတွေ နေရာလွတ်ကို မရှိ။ တဆက်တည်း။ အပေါ်ဘုံတွေဆို မီးလွတ်တဲ့နေရာ ရှိသေးတယ်။ ငရဲတွေကလည်း တယောက်နဲ့တယောက် ထပ်နေရော။
ရေလောင်းအိမ်သာခေတ်ဆိုတော့ ချီးတွင်းအထဲကလောက်တွေ မြင်ဖူးသူ နည်းမယ်။ စိတ်ကူးနဲ့ မှန်းကြည့်လိုက်။
လောက်ကောင်တွေ ချီးတွင်းအထဲက ချီးတွေအကြား တိုးဝှေ့သွားနေသလိုမျိုး ငရဲသားတွေလည်း ပြည့်ကျပ်နေရော။ ဆင်းရဲဒုက္ခ ဘယ်လောက်များကြမလဲ။ စိထားတဲ့နေရာ ဖြစ်တယ်။
မီးတောက်တွေ၊ ငရဲသားတွေနဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေ နေရာလွတ်မရှိ ဆက်နေတဲ့ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ငရဲပါလားလို့ တွေးမိနေတယ်။
ဒါတောင် နေရာလုနေတဲ့ ငရဲကောင်တွေက ရှိသေး။ အပူသက်သာမလား ဆိုပြီး။ ဘယ်လို ငရဲသားတွေပါလိမ့်ဟု တွေးနေမိတယ်။
« Reply #44 on: January 06, 2012, 07:50:00 AM »
`ခင်တို့အိမ်က ခင့်ကိုအိမ်ထောင်ချပေးတော့မယ်တဲ့မောင်…. ဒုက္ခပါပဲ ဘယ်လိုလုပ်မလဲမောင်….´
`သမီး… မာမီတို့စီစဉ်တာကိုငြင်းဖို့စိတ်မကူးနဲ့နော်…. မိဘဆိုတာသားသမီးကို ဆင်စီးပြီးမြင်းရံတာပဲ မြင်ချင်တာ…..မောင် လမ်းမတော်သား က ဆရာဝန၊် မျိုးရိုး၊ ငွေရေးကြေးရေး ကအစပြောစရာတစ်ကွက်မှ မရှိဘူး မိဘမျက်နှာကို အိုးမဲမသုတ်နဲ့´
(စတိုင်ဘောင်းဘီနှင့် ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်- နက်ကတိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ၊ မပါသည်ဖြစ်စေ.. မျက်မှန်တက်ထားသော အနှီသရုပ်ဆောင်ကို ဆရာဝန်ဟု သတ်မှတ်စေ။
မင်းသမီးလုပ်သူ မျက်စောင်းထိုးပြစေ။ မင်းသားလုပ်သူ အံကျိတ်ပြ တောက်ခတ်ပြစေ။ ပရိသတ်မှမေတ္တာပို့စေ။)
`အာ လူကဒီလောက်တောင် အဖျားတွေတက် သွေးဆုတ်ပြီး ဂယောင်ဂတန်းဖြစ်နေတာ´ အယ်နောက်ပြီး ဒီမရွေးရိုး ကြီးကမိန်းမကိုယ်ထဲက ထွက်လာတာလာလေ´
`အင်း….ဟုတ်မယ် ချော်လဲတုန်းက၀င်သွားတာဖြစ်မှာပေါ့။ ဆရာရယ်ကျွန်မတို့သမီးလေး ကိုတက်နိုင်မယ်ဆိုရင်ခွဲပြီး ကုပေးပါလား´
`ဒီဟာကကိုယ်ဝန်ဖျက်ချလို့ဖြစ်တာ တစ်ကိုယ်လုံးသွေးဆိပ်တွေတက်ပြီး ပိုးတွေပြန့် သွေးပေါင်တွေကျနေတာ… ချက်ချင်းခွဲရမည့် ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူး….´
`အမလေးအဖြစ်ဆိုးလှ ချည်ရဲ့ သမီးလေးရယ်….. ဆေးရုံလာတာတောင် အသက်မှီပါလား…. အဟာ့ဟား… ကျွန်မတို့သမီးကို သူတို့သတ်တာ…. အလကား လူသတ်သမား….´
(ခွဲချင်တာကိုမခွဲပဲ လက်ဆောင်ရထားသော ပိုးသတ်ဆေးများကို FOC ထိုးပေးလိုက်သော သူကိုဆရာဝန်ဟုခေါ်စေ။)
`ခင်ဗျားတို့ ဟာက အစပိုင်းမှာ ဗိုက်တပြင်လုံးနာတယ်ပြီးမှ ဗိုက်ညာဘက်အောက်က နေရာလေးကပဲ နာနေတာ ဖျားတယ်၊ အန်တယ်၊ သွေးဖြူဥလေးနည်းနည်းများနေတယ်၊ စမ်းကြည့်ချက်အရရော အူအတက်ရောင်တာပဲ´
`ဒီရောဂါမျိုးက ရောဂါရာဇ၀င်နဲ့ စမ်းသပ်တာနဲ့ပဲသိနိုင်တာ၊ ကုတဲ့နည်းလမ်းကလည်းခွဲတာပဲရှိတယ်´
`အမလေး အဖြစ်ဆိုလှချည်ရဲ့ ကျွန်မ သားလေးကို ရောဂါမှားတပ်ပြီးသတ်လိုက်ပါတယ်…အဲ့ အဟဲ့..အဲ…´
(ရောဂါဖြစ်စဉ်နှင့်စမ်းသက်မှုနှင့်သာ ခွဲခြားရသောရောဂါကြောင့် တစ်သက်လုံး အတွေ့အကြုံရင့် ဆရာကြီးအား ဆေးကုခွင့်သိမ်းစေ။ အတွေ့အကြုံနည်းသော နောက်လူများ ထိုသို့ကြုံတွေ့လာပါက ခေါင်းပန်းလှန်နည်း ဖြင့်သာဆုံးဖြတ်စေ။)
`ကြက်ခြေနီ၊ တွေတာဝန်သိပြည်သူတွေက မီးလောင်လူနာများကိုတာဝန်သိစွာကူညီကြသော်လည်း အရေးပေါ် ဘေးအန္တရာယ်ကိုစီမံဆောင်ရွက်နေသူ Triage ဆရာဝန်၊ ဆရာမများက မျက်နှာတွင်ပြုးံရွှင်ခြင်း အလျှင်းမရှိပဲ ကုသနေခြင်း မီးလောင် ဒဏ်ရာပိုးဝင်ပြီးဒုက္ခရောက်မှာစိုး၍ ဆိုကာသိချင်စပ်စု ကြကုန်သောလူများကိုဝင်ခွင့် မပြုသည့်အတွက် အလွန်တရာစိတ်ထားယုတ်မာသူများ ဖြစ်ကြသည်။ စပ်စပ်စုစု မေးချင်၊ ရေးချင်၊ အတင်းပြောချင်သူများကို လူနာ၏အတွင်းရေးဟုဆိုကာ မေးမြန်းမှုများကိုမဖြေသော လူယုတ်မာများ ဖြစ်ကြသည်။
မိမိလူနာဖြစ်သော်လည်း အထူးကြပ်မတ်ဆောင်ကဲ့သို့သော မိမိဌာနမဟုတ်သည့် ကိုယ်မကြွမ်းသည့် နေရာများပို့ရသည့် အခါတွင် လွှဲစာ ညွှန်းစာလေးသာရေးပေးပြီး ကိုယ်တိုင်ပါဝင်စွက်ဖက်ခြင်းမပြုသည့် လူယုတ်မာဖြစ်သည်။
သို့နှင့် ခေတ်အဆက်ဆက် ရုပ်ရှင်ကားများတွင် မင်းသားမင်းသမီးတို့အတွက်ချစ်ခြင်းကို ခွဲသောဗီလိမ်မှသည်ယနေ့ အချိန်တွင် လူသတ်ကောင်အဖြစ်တစ်ဖုံ၊ လူယုတ်မာအဖြစ်တစ်မျိုး၊ အကျင်နာမဲ့သူအဖြစ် တစ်သွယ် ဆေးပညာအကြောင်း နကန်းတစ်လုံမှ မသိသည့် လေးခုမြောက်ဒုတ်ချောင်းကြီး၏ ကြုံရင်ကြုံသလိုရိုက်နှက်ခြင်းကိုခံရလေသတည်း။
@kaung myat kyaw's fb
« Reply #45 on: January 10, 2012, 05:08:23 PM »
သံတမန် နှင့် အပျိုစင်တို့၏ မိမိအကြိုက်နှင့် တုန့်ပြန်စကားခြားနားချက်
မိမိ မကြိုက်သော အကြောင်းအရာကိစ္စတစ်ခုကို ပြောဆိုလာလျှင် အကူအညီတောင်းခံလာလျှင် ဘယ်တော့မှ ငြင်းပယ်လေ့မရှိ။ စဉ်းစားပေးမည်။ အကြောင်းပြန်မည်။ "NO" ဟု သုံးလေ့မရှိ။
မိမိ ကြိုက်နှစ်သက်သော လိုလားသော အကြောင်းအရာ ကိစ္စဆိုလျှင် ထောက်ခံသည်။ အကူအညီပေးသည်။ "YES" ဟု ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောသည်။
မိမိ မကြိုက်သော ကောင်လေး တစ်ယောက်က ရည်းစားစကားလိုက်ပြောပါက တစ်ခါတည်း ငြင်းလွှတ်လိုက်မည်။ တစ်ဖက်သား မျှော်လင့်ချက်မရှိအောင် "NO" ဟု ပြတ်ပြတ်သားသား အဖြေပေးလိုက်မည်။
မိမိကြိုက်သော ကောင်လေး တစ်ယောက်က ရည်းစားစကား လိုက်ပြောပါက စဉ်းစားဦးမည်။ အချိန်စောင့်ပါ။ ကျောင်းပြီးမှ။ အလုပ်ရမှ စသည်ဖြင့် နည်းနည်း မူတတ်ကြသည်။ "YES" ဟု တိုက်ရိုက်ပြောလေ့မရှိ။
အချုပ်အားဖြင့် သံတမန်လောကတွင် "YES" သာရှိပြီး အပျိုစင် လောကတွင် "NO" သာရှိသည်။
ထိုကြောင့် သံတမန်လောကတွင် Yes မဟုတ်ပါက No ဖြစ်ရန်သေချာပြီး အပျိုစင်ကို ရည်းစားစကားလိုက်ပြောပါက No မဟုတ်လျှင် အခွင့်အလမ်းရှိနိုင်သည်....
« Reply #46 on: January 12, 2012, 08:23:01 PM »
ရန်ကုန် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်အတွင်း အဲဇလုံ လေယာဉ်ကြီး ဆိုက်လေပြီ။ လေဆိပ်အတွင်း ဝင်လိုက်သည်နှင့် ဦးရုက္ခစိုး၊ ဖိုးရှုပ်နှင့် ကြွက်စုတ်တို့ အိုက်စပ်မွန်းကျပ်ခြင်းအရသာကို ခံစားလိုက်ရသည်။ လျှာရှည်သော ဖိုးရှုပ်က အလကား မနေ။ အနားတွင်တွေ့သည့် ရဲဝန်ထမ်းတဦးကို မေးလိုက်သည်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဒီမှာနောင်ကြီး … လေဆိပ်က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်ဖြစ်နေပြီး အိုက်စပ်လို့ပါလား။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။
ရဲ။ ။ အဲကွန်းပိတ်ထားတယ်။ ခင်ဗျား အေးတာကြိုက်ရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ ယပ်သာခပ်နေတော့။
ဖိုးရှုပ်။ ။ အဲကွန်းက ဘာလို့ ပိတ်တာလဲဗျ။ တော်ကြာ နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ အားနာစရာ။
ရဲ။ ။ (စိတ်မရှည်သလို ကြည့်ရင်း) အဲကွန်းအတွက်သုံးမယ့် ဆီတွေခိုးထုတ်ရောင်းထား … အဲ ယောင်လို့၊ ခင်ဗျား သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ညစ်ညမ်းစေမယ့် အလုပ်ကို တော်တော် အားပေးတဲ့သူပဲ။ နိုင်ငံခြားသားတွေက နားလည်မှုရှိတယ်။ ဘယ်သူမှ အိုက်တယ်မပြောဘူး။ ခင်ဗျား တယောက်တည်း အိုက်နေလို့ မနေတတ်ရင် ရေခဲတိုက်ထဲသွားနေ။
ရဲဝန်ထမ်းစကားကြောင့် ဖိုးရှုပ် ခေါင်းပုဝင်သွားသည်။ “သြော် ယဉ်ကျေးပျူငှာ ရွှေမြန်မာပါလား” ဟု တယောက်တည်း စဉ်းစားနေစဉ် အနားတွင် ကြွက်စုတ်တို့မရှိတော့။ ကြည့်လိုက်တော့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး တွင် တန်းစီနေသည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိဖြစ်သူက ကြွက်စုတ်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို သေချာစေ့ငုစွာ ကြည့်နေ၏။
လူဝင်အရာရှိ။ ။ ခင်ဗျား မြန်မာပြည် မပြန်တာ အတော်ကြာပြီနော်။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ၁၀ နှစ် ကျော်ပါပြီ။ တကယ်တော့ အရင်က ဟိုကဒီက ပြန်ပါတယ်။ ဟိုက ဒီက ဆိုတာ အထင်မလွဲပါနဲ့၊ ဦးရုက္ခစိုးနဲ့ နတ်ကြုံလိုက်တာကို ပြောတာပါ။ အခုလို အဲဇလုံနဲ့ ပြန်တာက ဒါပထမဆုံးပါ။ ဒါကလည်း တိုင်းပြည်ကြီး ပြောင်းလဲနေပြီဆိုလို့ ကြည့်ချင်လွန်းလို့ ပြန်တာပါ။
လူဝင်အရာရှိ။ ။ လျှာရှည်လိုက်တာ မိချောင်းသားရယ်။ အေးလေ … ရားဘာဒယ်၊ ရားဘာဒယ် (ရပါတယ်ကို ဝမ်းသာ အားရ ပြောခြင်းဖြစ်သည်) ဒါပေမယ့် ၁၀ နှစ်တောင် ပြည်တွင်း ပြန်မလာတဲ့သူဆိုတော့ လက်ဆောင်လေး ဘာလေးတော့ ပါမှာပေါ့နော်။
ချိုသာစွာမေးသည် အရာရှိကိုကြည့်ရင် ကြွက်စုတ်အားတက်သွားသည်။ စိတ်ထဲမှလည်း “ယဉ်ကျေးပျူငှာ ရွှေမြန်မာဆိုတာ ဒါမျိုး” ဟု တွေးလိုက်သည်။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဟာ ပါပါတယ်။ ရွာက ကြီးတော်ကြီးက ညောင်းတတ်လို့ ထိုင်းရိုးရာ ကျပ်ထုပ်က တခု၊ အရက်ကြိုက်တတ်တဲ့ ဘကြီးအတွက် ထိုင်း တောအရက် တပုလင်း … ပြီးတော့ …။
လူဝင်အရာရှိ။ ။ အဲဒါတွေကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်ပြောတာက လက်ဆောင် ဘတ်ငွေလေးဘာလေး ဟဲဟဲ။
ကြွက်စုတ်။ ။ သြော် ဒါလား ပါပါတယ်၊ ပါပါတယ်။
လူဝင်အရာရှိ။ ။ (ခပ်တိုးတိုးလေသံဖြင့်) ဒါဆိုလုပ်လေဗျာ။ ကျုပ်ကို ဘတ်ငွေလေး ဘာလေး ပေးခဲ့ပါဦး။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဘတ်ငွေ ပေးခဲ့ရမယ်ဟုတ်လား။
ကြွက်စုတ်က အူကြောင်ကြောင်လုပ်နေသဖြင့် ဦးရုက္ခစိုးက တံတောင်ဖြင့်တွတ်လိုက်ရာ အိတ်ထဲမှာ ၁၀ ဘတ်စေ့ တစေ့ကို အယောင်ယောင်အမှားမှားဖြင့် ထုတ်ပေးလိုက်သည်။
လူဝင်အရာရှိ။ ။ ဟင် ဒါပဲလားဗျ။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဘုရားစူးရပါစေ့ဗျာ။ ကျုပ်မှာ ဘတ်ငွေဆိုလို့ ဒါပဲပါပါတယ်။ အဲဒါ ဖိုးရှုပ်မသိအောင် ဘတ်ထားတဲ့ ငွေလေးပါ။
ကြွက်စုတ်၏ ခုနစ်သံချီအသံကြောင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိလည်း လန့်သွားပြီး ဘေးဘယ်ညာကိုကြည့်ကာ ဘတ်ငွေ ၁၀ ကို ယူ၍ နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကို ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး ပြန်ပေးလိုက်ကာ လွှတ်ပေးလိုက်သည်။ ဦးရုက္ခစိုးက ကိုယ်ယောင် ဖျောက်ထားသောကြောင့် မင်သေသေဖြင့် ကြွက်စုတ်ဘေးက ဝင်လိုက်လာသည်။
ဖိုးရှုပ်လည်း တဘက်က လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အရာရှိမ တဦးကို ဘတ်ငွေ ၂၀ ပေးကာ ဖြတ်သန်း လာခဲ့သည်။ သူလည်း အယ်ချုပ်ကြီးအိတ်ထဲက ဘတ်လာသည့် ဘတ် ၂၀ ဖြစ်သည်။
လေဆိပ်ထဲကထွက်လာတော့ ရန်ကုန်လေကို တဝကြီးရှုလိုက်ရာ မီးခိုးနံ့များကြောင့် ၂ ဦးနှင့်တပါး ချောင်းတဟွတ်ဟွတ် ဆိုးကြလေတော့သည်။ သူတို့ရှေ့တွင် တက္ကစီတစီးက “ဖုန်းဒိုင်း ဖုန်းဒိုင်း” အသံမျိုးစုံမြည်ကာ လာရပ်သည်။ တက္ကစီဒရိုင်ဘာ ဆင်းလာပြီး သူတို့လက်ထဲက အထုပ်များကို ရိုသေစွာ ယူ၍ ကားပေါ်သို့တင်လိုက်သည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဒီလိုတော့လည်း ရန်ကုန်သားတွေက ဧည့်ဝတ်ကျေကြသားပဲကွ။ ဒါမျိုးကို ယဉ်ကျေးပျူငှာ ရွှေမြန်မာလို့ ခေါ်တယ် သိလား။
ဒရိုင်ဘာ။ ။ ကားပေါ် ကြွကြပါခင်ဗျ။
ဖိုးရှုပ်နှင့် ကြွက်စုတ်မှာ ဒရိုင်ဘာဖြစ်သူ၍ ယဉ်ကျေးပျူငှာသော ပုံစံကြောင့် စိတ်ကြီးဝင်ပြီး ကားပေါ်တက်ထိုင် လိုက်သည်။ ဦးရုက္ခစိုးလည်း မနေသာတော့ဘဲ လိုက်တက်လိုက်ရသည်။ ကားနောက်ခန်းတွင် ထိုင်လိုက်သော ဖိုးရှုပ်မှာ “အောင်မလေးဗျ” ဟု ရုတ်တရက် အော်လိုက်သဖြင့် အားလုံး လန့်သွားကြ၏။
ဒရိုင်ဘာ။ ။ ဆိုဖာစုတ်ပြီး စပရိန်ထွက်နေလို့ပါ။ နည်းနည်းလောက် ရှောင်ထိုင်လိုက်။ အားလုံးအဆင်ပြေ သွားမယ်။
ဒရိုင်ဘာ ပြောသည့်အတိုင်း ဖိုးရှုပ်က ထိုင်လိုက်စဉ် ကြွက်စုတ်က တံခါး ပိတ်မရဘဲ ဖြစ်နေသည်။ ဒရိုင်ဘာက တံခါးကို အပြင်မှ လာပိတ်ကာ ဝါယာကြိုးဖြင့် သေချာစွာ ချည်တုပ်ရင်း “အားလုံး အဆင်ပြေသွားပါပြီ ခင်ဗျာ။ ဘယ်ကို ပို့ပေးရပါမလဲ” ဟု မေးလိုက်သည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ ဈေးသိပ်မကြီးတဲ့ ဟိုတယ် ဒါမှမဟုတ် တည်းခိုခန်း တခုခုကို ပို့ပါ။
ဒရိုင်ဘာ။ ။ ဟိုဟာရတဲ့ တည်းခိုးခန်းရှိတယ် ဆရာတို့။ ဈေးလည်း သိပ်မကြီးစေရဘူး။ မှတ်ပုံတင်လည်း ပြစရာ မလိုအောင် ကျနော် စီစဉ်ပေးလို့ရတယ်။
ဒရိုင်ဘာက ပြောရင်းဆိုရင်း ကားပြူတင်းပေါက်မှ ကွမ်းတံတွေးကို လမ်းပေါ်သို့ ပြစ်ခနဲ လှမ်းထွေးလိုက်သေးသည်။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဟိုဟာဆိုတာ ဘာလဲဟင် … ရေပူရေအေးရတာကို ပြောတာလား။
ဒရိုင်ဘာ။ ။ ဟာ ကိုယ့်ဆရာကလည်း ပိန်းလိုက်တာ။ ဟိုဟာဆိုတာ ဟိုဟာပေါ့ဗျာ။ ဘာညာကွိကွပေါ့။
ဖိုးရှုပ်က ရုတ်တရက်သဘောပေါက် သွားပြီး “ဟာ ရတယ်၊ ရတယ်။ ကျနော်တို့ကို အသင့်အတင့် ဟိုတယ် တခုခုသာ ပို့ပေးပါ” ဟု ပြောလိုက်သည်။ ကားသမားက ကားကို ဆောင့်ထွက်လိုက်ရာ “ဖုန်းဒိုင်း” သံစုံမြည်၍ ထွက်ခွာသွားသည်။ ကားက လမ်းလျှောက် တဂျုံးဂျုံးမြည်နေသည်။
ဒရိုင်ဘာ။ ။ ဟဲဟဲ … ကျနော့်ကားက သိပ်မဆိုးပါဘူး။ လမ်းတွေက ချိုင့်တွေချည်းပဲမို့လို့ပါ။
ကားပေါ်တွင် သူတို့အားလုံး ယိမ်းထိုးနေကြသည်။ ကားက မီးပွိုင့်ကို ပွတ်ကာသီကာ ကျော်ဖြတ်သည်။ သူ့ကားကို ကားတစီးစီးကျော်ဖြတ်သွားလျှင် ဒရိုင်ဘာက ဆဲသည်။ ဒီလိုနှင့် အလတ်စား ဟိုတယ်တခု ရှေ့တွင် ကားဘရိတ်ကို ဆောင့်အုပ်လိုက်တော့သည်။
ကြွက်စုတ်။ ။ ဘယ်လောက်ကျလဲ။
ဒရိုင်ဘာ။ ။ တသောင်းခွဲ ကျပါတယ်။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဟာ များလိုက်တာဗျာ။ ခင်ဗျား တက္ကစီမှာ မီတာမပါဘူးလား ကြည့်ရအောင်။
ဒရိုင်ဘာက ဖိုးရှုပ်အား မျက်ထောင့်နီဖြင့် ကြည့်၍ “ခင်ဗျား ရူးနေလား။ ဒီလောက်စုတ်နေတဲ့ကား ဘယ်လိုလုပ် မီတာ တပ်မှာလဲ။ ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ်တော့ မလုပ်နဲ့၊ ပေး တသောင်းခွဲ” ဟု ပြောလိုက်သည်။
ရုက္ခစိုး။ ။ နည်းနည်းလောက် လျှော့ပေးလိုက်ပါ ငါ့တူရယ်။
ဒရိုင်ဘာ။ ။ ခင်ဗျားက ဘယ်ဇာတ်ထဲကလဲ အဘိုးကြီး။ ကြောင်တောင်တောင်မလုပ်ပါနဲ့။ တပြားမှ မလျှော့ပေးနိုင်ဘူး။ ကားပေါ်မတက်ခင် ကတော့ ဈေးမမေးဘဲနဲ့။
ဖိုးရှုပ်။ ။ ဒါကတော့ ခင်ဗျားက ကျနော်တို့ အထုပ်တွေကို ယူပြီး ကားပေါ်တင်လိုက်တာကိုး။ မေးချိန်မှမရတာ။
ဒရိုင်ဘာ။ ။ ဟာ … ခင်ဗျားတို့ တောသားတွေပဲ။ ဒါ ရန်ကုန်ဗျ။ ရန်ကုန်။ တောမဟုတ်ဘူး။ အူကြောင်ကြောင် လာမလုပ်နဲ့ အကုန်လုံး ပြဿနာ တက်သွားမယ် ဘာသိလဲ။
ဒရိုင်ဘာက စွတ်ဟောက်နေသဖြင့် အကျယ်အကျယ် မငြိမ်းဖွယ်များ ဖြစ်လာမည်ကို စိုးရိမ်သော ဦးရုက္ခစိုးမှာ မြန်မာကျပ်ငွေ ၅ ထောင်တန် ၃ ရွက်ကို အပ်ချလောင်းဟု မန်း၍ ပေးလိုက်မှ ကားကို ဆောင့်ထွက်ကာ “ဖုန်းဒိုင်း” သံစုံမြည်၍ မောင်းထွက် သွားလေတော့သတည်း။ ။
@By featured, ရန်ကုန်သားတာတေ
« Reply #47 on: January 15, 2012, 12:55:42 AM »
ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံက ဝန်ထမ်းဆရာဝန်လင်မယားတွေ နိုင်ငံခြားကို တူစုံယှဉ်တွဲခရီးထွက်ခွင့် မရှိဘူးတဲ့ခင်ဗျ။
ဆေးကျောင်းသူကျောင်းသားဘဝမှာ သမီးရည်းစား၊ ကျောင်းပြီးလို့ နှစ်ယောက်လုံးအလုပ်ထဲဝင်ကြတော့ လက်ထပ်ကြ၊ ပြီးတော့ ဖူးခက်ကို ဟန်းနီးမွန်းထွက်ဆိုတာ လွန်းထားထား ဝတ္ထုထဲမှာတော့ ဖတ်ဖူးသား။ ဘဲဒီး ဂဒိုမန်းတစ် (Very romantic!)
တကယ့်လက်တွေ့မှာတော့ အဲလောက် ပိုက်ဆံရှိတဲ့ မြန်မာဝန်ထမ်းဆရာဝန်ပေါက်စစုံတွဲတကယ်ရှိရင် ဂင်းနစ် - အဲလေ၊ ဖူးခက်ကိုလည်း ဟန်းနီးမွန်းခရီးထွက်မယ်ဆိုရင် တစ်ယောက်တစ်လှည့် သွားရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျား။ (“ကိုကို့ ပတ်စ်ပို့ ပြန်အပ်မှ မိုမို့ပတ်စ်ပို့ ထုတ်ပေးမယ်တဲ့ ကိုကိုရယ်။ ကိုကို ဟန်းနီးမွန်းထွက်နှင့်တဲ့အချိန် ကိုကို့ ဆေးရုံဂျူတီတွေကိုမိုမို relieving ဆင်းပေးထားမယ်နော်။ ပြီးမှ မိုမို တစ်လှည့် သွားမယ်။ ကိုကို့ရဲ့ ဟန်းနီးမွန်း ဂျူတီတွေကိုလည်း မိုမို ဟိုမှာပဲ relieving ရှာလိုက်မယ်နော်။”) - ဟုတ်ပေါင်၊ ပြောရင်းနဲ့ ရှုပ်ကုန်ပြီ။
သြော် - ဒီလို မဟာဗျူဟာမြောက် ပေါလစိ (policy) ချထားရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ လင်မယားနှစ်ယောက် အတူ ပေးထွက်လိုက်ရင် ပြန်မလာတော့မယ့် ဖြစ်နိုင်ချေ များလို့ပါတဲ့ခင်ဗျာ။ တစ်ယောက်ကို ပြည်ထွက်ခွင့်မပေးဘဲ နိုင်ငံအကျယ်ချုပ်နဲ့ ထားထားရင်တော့ ထွက်သွားတဲ့ တစ်ယောက်ကလည်း အချိန်တန်ရင် မဖြစ်မနေ ပြန်လာရမှာပဲဆိုတဲ့ အင်မတန် သမာသမတ်ကျတဲ့ အိုင်ဒီယာခင်ဗျ။ (“မင်းမိန်းမနဲ့ ဒီဘဝမှာ ပြန်တွေ့ချင်သေးတယ်ဆိုရင် သင်တန်းပြီးတာနဲ့ ဒီကို တန်းတန်းကြီး ပြန်ခဲ့တော့။”)
စူဠလိပ် ရေထဲလွှတ်ရရင်တောင် လိပ်ခွံတော့ ချွတ်ပြီးထားခဲ့ဦးဆိုတဲ့ အိုင်ဒီယာဗျ။
“အိုင်ဆေး ဦးဘချစ်၊ ခင်ဗျားတို့ ချစ်ခြင်းကို မခွဲချင်ဘူးဗျာ နော်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား ကျုပ်ကို နောင် ဒုက္ခမပေးရဲအောင်တော့ကာ မမြဝင်းကို ကျုပ် ခေါ်ထားရလိမ့်မယ်ဗျ … ဟွန်းဟွန်း …” ဆိုတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင့် အိုင်ဒီယာမျိုးဗျ။ (ဗိုလ်အောင်ဒင် = ဓားပြဗိုလ်။)
ဒါဟာ Social kidnapping လူမှုရေးပြန်ပေးဆွဲခြင်းပဲဗျ။ အခု နိုင်ငံတော်က ဖော်ဆောင်နေတဲ့ ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်နဲ့လည်း ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီး ဆန့်ကျင်နေသလားလို့ပဲ။ (ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်က ဖြောင့်ဖြောင့်ကြီးဆိုရင်ပေါ့လေ အဟီး။)
အိုင်ဆေး … တစ်ဖက်နိုင်ငံမှာ သင်တန်းသွားတက်ရမယ့် ကိုယ့်ဇနီးကိုယ် စိတ်မချလို့ လိုက်ပို့ချင်တယ်ဗျာ။ ဟိုမှာလည်း ရောက်တုန်းရောက်ခိုက် လေးငါးရက်လောက် အတူလည်လိုက် ပတ်လိုက်ချင်သေးတယ်ဆိုရင် နှစ်ယောက်လုံး ပတ်စ်ပို့ပြိုင်တူရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။
မူနဲ့ လွတ်အောင်ဆိုရင် လင်မယား မဟုတ်မှပဲ ရမှာပေါ့။ ဒီတော့ကာ “နှစ်ဦးသဘောတူ (ခေတ္တ) ကွာရှင်းပြတ်စဲ ပြီးစီးခြင်း” ဆိုပြီး ကြေညာလိုက်ဗျာ။
“ကျွန်တော်တို့ လင်မယားမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျ။ သူလည်း သူ့ကိစ္စနဲ့သူ နိုင်ငံခြားသွားမှာ။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ကိစ္စနဲ့ ကျွန်တော်ပဲ။”
“သြော် လေယာဉ်တစ်စီးတည်း ထိုင်ခုံနံပါတ် ကပ်လျက် ဖြစ်နေတာကတော့ အခင်မင် မပျက်အောင်လို့ပါ ခင်ဗျာ။”
(“ဟိုရောက်တော့လည်း ဟိုတယ်တစ်ခန်း နှစ်ယောက် အစုအစပ်ငှားပြီး … ဟဲဟဲဟဲဟဲ … အခင်မင်မပျက်ပေါ့ခင်ဗျာ။”) - စိတ်ထဲမှ ကြုံးဝါးခြင်း။
“နှစ်ဦးသဘောတူ ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးစီးခြင်း ပြီးစီးသွားပါ၍ ဒုတိယမ္ပိ လက်ထပ်ပြီးစီးခြင်း။”
“ဒုတိယမြောက် ဟန်းနီးမွန်းခရီးကို ဖြစ်မြောက်အောင် အဖက်ဖက်မှ ဝိုင်းဝန်းဖိအားပေး ပေးပါသော တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များကို ကျေးဇူးဥပကာရ အထူးတင်ရှိပါကြောင်း ...”
ဟုတ်တယ်လေ။ ဒီလို ကြံတီးကြံဖန် ရူးတူးပေါတော လျှောက်စဉ်းစားပြီး လိုက်လုပ်ပေးမှ ကျင့်သုံးနေဆဲ ပေါလစိ (policy) တွေနဲ့ ရှေ့သွားနောက်လိုက်၊ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်၊ အိုးရွဲ့နဲ့ စလောင်းရွဲ့၊ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူး လိုက်ဖက်ညီတော့မပေါ့လို့။ ဘယ့်နှယ့်လဲဦးဘချစ်ကဲ့ … ဟွန်းဟွန်း …
PS: မိန်းမရေ ကို့ကို ဂယ်ချစ်ရင် အထက်လူကြီးတွေ မသိအောင် လာခိုးပါ။ စနေနေ့ည ကိုးနာရီ တံတားဦးလေဆိပ်ကစောင့်မယ်။ ဟိုကနေ ကို့အတွက် ပတ်စ်ပို့အတု လုပ်ခဲ့ဦး။ ရင်တွေခုန်လိုက်တာနော် … အဟိ။
@dr aung khine's fb
« Reply #48 on: January 17, 2012, 02:50:19 AM »
တခါက လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်။ တယောက်က မျက်စိမမြင်တဲ့သူ။ ဒါပေမယ့် ဉာဏ်တော့ရှိတယ်။ သူ့ နာမည်က ဖိုးဉာဏ် တဲ့၊ နောက်တယောက်တော့ ဗလကောင်းကောင်းနဲ့ လူပဲ။ ဆိုးတာက သူကဉာဏ်တော့မရှိဘူး။ အဲ့ သူသိတာတခုတော့ ရှိတယ်အဲ့ဒါ ဖိုးဉာဏ်ကို ဆရာတင်ရမယ် ဆိုတာပဲ။
သူ့ နာမည် ဗလတဲ့။ သူတို့က အတွဲတော့ညီသား။ ဗလ က ဖိုးဉာဏ် ကို ကုန်းပိုးပြီးသွားတတ်သလို ဖိုးဉာဏ်တော့ ဗလ ပြောတာနားထောင်ပြီး ဆုံးဖြတ်ပေးတတ်တယ်။ ဘယ်လောက်တောင် လဲဆိုတော့ တခါက သူတို ညပိုင်းကြီးပြန်လာတာ ဗလ က …
“ဟေ့ကောင် ဖိုးဉာဏ်ငါတို့ဆီကို ခပ်လင်းလင်းဟာကြီးနှစ်ခု ပြေးဝင်လာတယ်”
“ခပ်လင်းလင်းနဲ့ အသံတွေလဲ ထွက်နေတယ် နှာမူတ်သံကြီးနဲ့ ငါတို့နဲ့တောင် အတော်နီးလာပြီ”
“လင်းလဲ လင်းတယ် အသံလဲထွက်နေတယ် ဟုတ်လား”
“အေး ငါတို့နဲ့တောင် သိပ်မကွာတော့ဘူး”
“တ တီတီတပွမ်ပွမ်နဲ့ ကွ”
“ဟာ …. မင်း အဘ … အဲ့ဒါ… ကားဟ… ရှောင်ရှောင်…”
အသေအလဲရှောင်လို့ မတိုက်မိပေမယ့် နှစ်ယောက်လုံး လမ်းဘေးကို ဒိုင်ဗင်ပစ်လိုက်ရလို့ အကွဲကွဲ အပြဲပြဲပဲ။ အဲ့လိုနှစ် ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ်အပေးအယူတော့ဖြောင်လို့။ အဲ့လိုနဲ့ တနေ့ညတညမှာ သူတို့ အိမ်အပြန်မှာ အပင်ကြီးတပင်ကြီး အောက် ကဖြတ်ပြန်ရတယ်။
အဲ့အပင်မှာ ညဂျူတီကျတဲ့ သရဲတကောင် ရောက်နေတယ်။ သူ့တာဝန်က ဒီညမှာ ဒီအပင်အောက်ကိုဖြတ်တဲ့ လူနှစ် ယောက်ကို ခြောက်ရမှာ။ တခါတည်း နှစ်ယောက်ကိုတွေ့တော့ ပိုင်ပြီပေါ့ပိုတဲ့အချိန်ကို ဘီယာဆိုင်ထိုင်မယ်၊ မာဆတ် သွားမယ်ပေါ။ ဒါကြောင့် ၀ုန်းထခနဲခုန်ချပြီး သူရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ လက်တွေကို ဆန့်ထုတ်လိုက်တယ်။ ဗလ က သူရှေ့ရောက်လာတဲ့ သရဲကို သေချာကြည့်ပြီး …
“ဖိုးဉာဏ်ရေ ငါတို့ရှေ့ကို အဖြူရောင်အ၀တ်နဲ့လူတယောက် ခြေကားယား လက်ကားယား လုပ်နေတယ်”
“ဟေ …. မော်တော်ပီကယ်နေမှာပါကွာ သူတို့ဖလားကြီးတောင် ပါဦးမယ် ”
“ မျက်လုံးပြူးကြီးနဲ့ ဟ ”
“လျှာကလဲ တတောင် လောက်ထွက်နေတယ်”
သူတို့ပြောနေတာတွေ ကြားပြီး ကြာတော့ သရဲလဲစိတ်က မရှည်တော့ဘူး။
“ဟိတ်လူတွေကြောက်ကြလေဗျာ ကျုပ်က တစ္တေ ခင်ဗျားတို့တွေ ကိုခြောက်နေတာ”
“ဖိုးဉာဏ်ရေ ငါတို့ကို သူက တစ္ဆေခြောက်နေတာတဲ့”
“အာ သူက သရဲဆိုတိုင်း ယုံလို့မရဘူးကွ ဒီခေတ်ကြီးက အလိမ်အညာတွေများတယ်။ သူ့မှာ ဘာအထောက်အထားပါ လဲ၊ မေးကြည့်ကွာ”
သရဲလဲ အတော်တင်းနေပြီ ဒါနဲ သူ့ရဲ့ သရဲမှတ်ပုံတင်ကတ်ပြားကို ပြလိုက်တယ်။ သူ့ဘ၀သက်တမ်းမှာ ဒီလိုကတ်ပြား ပြပြီး ခြောက်ရတဲ့ လူမျိုးမတွေ့ဖူးဘူး။ ဗလ က မှတ်ပုံတင်ကိုကြည့်ပြီး
“ပုံက၀ါးတယ်ဆိုတော့ ယုံလို့မရသေးဘူး ပြီးတော့ အဲ့ ကတ်ပြားကို ငါကမြင်ရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဗလ ဒီကောင် ကြည့်ရ တာ မသင်္ကာစရာဘဲကွ၊ ကြာတယ်ကွာ ဒီကောင်ကို မင်းချုပ်ထားလိုက်စမ်းကွာ”
ဒါမျိုးကတော့ ဗလတို့ ဘာသွက်သလဲမမေးနဲ့ ချုပ်ထားလိုက်တာ သရဲခမျာ ယှက်ကန်ယှက်ကန်နဲ့ မိပါရော။
“ဟေ့… လူတွေ…. ကျုပ်က… သ… ရဲနော်.. ကျုပ်… ကိုင်လိုက်ရမလား”
“အောင်မာ အခုထိ သရဲက တပြားသားမှ မလျော့သေးဘူး…၊ အေး မင်းကိုငါမေးမယ် မင်းသရဲ ဆိုသိရမယ် လူဟာသေ ရင် ဒွါရကိုးပေါက်က အသက်ထွက်တယ်လို့ဆိုတယ်၊ မင်းဟာ သေဖူးတဲ့ သရဲ ဆိုတော့ သိရမယ်၊ ပြော မင်း ဘယ်အ ပေါက်ကထွက်သလဲအသက်။”
သရဲ လဲ အတော် ညစ်သွားတယ်၊ ကို့ဟာကို ဘယ်က ထွက်မှန်းမသိဘူး။ ဒါနဲ့ ရမ်းဖြီး လိုက်တယ်။
“ နာ… နား … က… ထွက်တာ”
ဒီအခါဖိုး ဉာဏ်က တောက်တချက် ပြင်းပြင်းခေါက်ပြီး
“လူ့ရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ နားနှခေါင်းထွက်ရင် ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တယ် ကွ။ ဟေ့ကောင်ဗလ ဒီကောင်လူလိမ်ကွ ချကွာ”
ဘာပြောကောင်းမလဲ ဗလ သမလိုက်တာ သရဲ ခွေခွေ လေးကျန်ခဲ့တယ်။
ဒီဇာတ်ကပြီးမသွားခဲ့ဘူး။တစ္ဆေလောကမှာ ဂယက်ထသွားတယ်။ သရဲတွေ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးကြတယ်။ ငါတို့က ဘာလဲ ဘာတွေလဲ ဘာကောင်တွေလဲ။ ဆောက်တည်ရာမရ ဖြစ်ကုန်တယ်။ တစ္ဆေအကြီးအကဲကြီးကတော့
“တို့တွေက သရဲတွေပါ သံသယ မရှိကြပါနဲ့”
ဒါပေမယ့် သူစကား ဘယ်သူမှနားမထောင်ကြဘူး ။ခေါင်းဆောင်ကြီးလဲ တဖွဖွပြောရင်း သူ့ဘ၀ နောက်ဆုံးအချိန် ရောက်တော့ သေတမ်းစာမှာ မှာခဲ့တယ်။
မျက်စိ မမြင်တဲ့သူနဲ့ ဉာဏ်နည်းတဲ့ သူတွေကို ဘယ်တော့မှ မခြောက်ပါနဲ့တဲ့။ ခုချိန်ထိ ဘယ်မျက်မမြင် ဘယ်အရူးကိုမှ
တစ္ဆေခြောက်တယ်လို့ မကြားမိတာ အမှန်ပါပဲ ။
cupid boy (from mail group)
« Reply #49 on: January 20, 2012, 02:47:48 PM »
ဒီကိစ္စ ဆိုးပေ မြို့တက်သင်တန်းတက်ရာကစသည်။
ဆိုးပေတို့သင်တန်းက ညစ်ပါတ်သည်လို့ဆိုးပေအမေကပြောသည် အီးတွေဝမ်းတွေပါသည် လို့လည်းသိရသည်။ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အရင်တုန်းကဆိုးပေ ပွင့်လင်းတတ်သည်။အသံကျယ်ကျယ်ပြောတတ်သည်။ ဒါပေမယ့်မြို့သင်တန်းကပြန်လာတော့ ဇာတ်မင်းသားပုံပေါက်လာသည် ။ စကားပြောလျှင် နုတ်ဖျားနှင့် ဇာတ်မင်းသားလိုလိုပြောတတ်လာသည်။ သူပြောတော့ပညာရှိတွေဒီလိုပြောသည်ဆိုဘဲ။
ဒီကြားထဲ ဘိုစကားတွေညှပ်ပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပြောလာပြန်သည်။ ပရောဂျက် ဆိုပြောပြောနေသဖြင့် ပရောဂဆရာက သူ့ဂွင်လုမည်ဟုထင်ပြီးမကြည်။ကလေးတွေ ထုတ်ဆီးတိုးနေသည့်ကြားထဲ ဂိမ်းသီအိုရီဝင်ပြောပြန်သည်။၀င်းဝင်းတို့အမေက အိမ်လာတိုင်သည် ရွာထဲဝင်းဝင်းသီအိုရီ(win-win) လျှောက်ပြောနေ၍ ၀င်းဝင်းတို့အရှက်ရသဖြင့်ဖြစ်သည်။စီဘယ်ဆိုရှိက်ရတီဆိုတာ ဆိုးပေပါးစပ်ကထွက်နေကြ။ ဒီလိုနားမလည်သော အရာများပြောသဖြင့် အိမ်ဆွမ်းခံကြွနေကျ ကိုယ်တော်လည်းမလာတော့ လဘက်ရည်ဆိုင်ရှင်က သူလာလျှင်လူရှင်းသဖြင့်ဆိုးပေ အားလက်လန်သည်။ ဆိုးပေအားရွာရှိကလေးလူကြီး ဆိုးပေအားရှောင်ကြသည်။ နောက်ဆိုးပေ မြို့ပြန်ပြေးသည်။
သိပ်မကြာ ဆိုးပေပြန်ရောက်လာတော့ သူဟာအမတ်လောင်းဖြစ်သည်ဟုပြောပြန်သည်။ ပုတ်သင်ညိုပါတီကဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ သူမဲဆွယ်သည်ကို သူ့အမျိုးတွေမနေရ တစ်အုပ်လုံးလိုက်ရသည်။ ရွာရှိ နွားလှည်းနှင့်ထရော်လာဂျီတွေကို အစိုးရကိုဝယ်ခိုင်းပြီး ကားသေးသေးလေးတွေသွင်းပေးမယ်လို့ ပြောပြန်သည်။ ရွာသားတွေ ကားမောင်းသင်ဖို့ လိုင်းကားဆရာ ကိုပြားကို အပူကပ်ကြသည်။သို့သော်ဆိုးပေ ကိုခွေးကိုရှုံးသည် ။ ရွာသားတွေမဲမထည့်၍ရှုံးရသည်လို့ ပြသနာရှာ သည် ။ဆိုးပေအဖေက ဆိုးပေကိုနဘမ်အုပ်သည် ငါးသိန်းကုန်၍ဖြစ်သည်။ဆိုပေ လူတွေကိုမကြေနပ် ထို့နောက်ဆိုးပေ စကားသိပ်မပြောတော့ ။ရွာဝမ်းသာသည်။
နည်းနည်းကြာပြီးတစ်ရက် ဆိုးပေအမေ အော်ပြီးရွာထဲပြေးနေသည် ။ ဆိုပေ စာထားခဲ့သည်ဟုသိရသည် ။နောက်ဘ၀သမ္မတဖြစ်အောင် ရွာဘေးကဧရာဝတီမြစ်ထဲခုန်ချတော့မည်ဟုရေးခဲ့သည်။ ရွာသားတွေ အမျိုးတွေမြစ်ဆီပြေးကြသည်။ ဟိုရောက်တော့ ရင်ခေါင်းလောက်ရှိတဲ့မြစ်ထဲမှာ ဆိုးပေငိုနေသည်။ အကြောင်းအရင်းက ဧရာဝတီဖြစ်ရေနည်းသည်ကို သူ့သင်တန်းက သင်မပေးခဲ့၍ဖြစ်သည်။
အံဖွယ်ဆိုးပေပါတကား ရွာအကြောင်း မြစ်အကြောင်း မြို့သင်တန်းက သူ့မပြောပြခဲ့ပါလား....။